08/22/13 ~ Myanmar Forward
ရှစ်လေးလုံး ပိတ်ကားနောက်မှ ဖြစ်ရပ်မှန်တစ်ခု
Posted by drmyochit Thursday, August 22, 2013, under ဆောင်းပါး | No comments
လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၅ နှစ်က ဒလမြို့မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကိုယ်တွေ့အဖြစ်အပျက်လေးပါ။ ကျွန်တော်တို့ ဒလမြို့ဟာ ရန်ကုန်တဖက်ကမ်းမှာရှိပေမယ့် ၁၉၈၈ တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာနဲ့ ဆန္ဒပြပွဲတွေ ဆက်တိုက်ဖြစ်လာချိန်မှာ ဒလမြို့ကိုလည်း ရိုက်ခက်လာပါတယ်။ သြဂုတ်လအတွင်း ရန်ကုန်မြို့လယ် တစ်ခုလုံး အပျက်အဆီးပုံအောက် ရောက်ရှိသွားချိန်မှာ လမ်းပမ်းဆက် သွယ်ရေးအားလုံးလည်း ပြတ်တောက်သွားပါတယ်။ အဓိကပြဿနာ ကတော့ ဆန်ပြဿနာပါ။ ဆန္ဒပြပွဲတွေကလည်း တစ်နိုင်ငံလုံးအနှံ့ ဖြစ်နေ တာကြောင့် ကုန်ဈေးနှုံးကလည်း ဆက်တိုက်တက်လာပါတယ်။ နောက်ပိုင်း မှာ ဆန်ဂိုဒေါင်၊ ပဲဂိုဒေါင် နဲ့ ဂျုံဂိုဒေါင် တွေဖောက်ပြီး ခိုးယူတဲ့ဖြစ် စဉ် တွေကလည်း နေရာအနှံ့ပါ။ ဂိုဒေါင်ထဲက ပစ္စည်းတွေကုန်တော့ အရပ်ထဲက လူနေအိမ်ထဲက ပစ္စည်းတွေကို ပြဿနာရှာလာကြပါတယ်။ ဆန္ဒပြကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်များက ရဲစခန်းတွေကို မီးရှို့လိုက်တာကြောင့် ရပ်ကွက်တွင်း လုံခြုံရေးအတွက် ကိုယ်ထူကိုယ်ထ အလှည့်ကျ ကင်းစောင့်နေကြရပါတယ်။
ရှစ်လေးလုံး ကောင်းမှုကြောင့်ဒလမြို့တွင်းကမရှိဆင်းရဲသားအများအပြားဟာ ဆန်ကွဲများကို ပြုတ်ပြီး သောက်နေကြရပါတယ်။ ငတ်မွတ်မှုဒဏ်ကို မခံနိုင်ကြတဲ့နောက်မှာ ဒလမြို့ခံ ၈ ဦးဟာ ဗိုလ်တစ်ထောင် ဆိပ်ကမ်းသို့ သမ္ဗန်များနဲ့သွားပြီး ဆန်သင်္ဘော တစ်စီးပေါ်က ဆန်တွေခိုးယူဖို့ ထွက်သွားချိန်မှာ အဲဒီနေရာမှာ လုံခြုံရေးယူထားတဲ့ အဖွဲ့က ဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီချိန်တုန်းက လူစိမ်းမြင်သမျှကို မီးရှို့မဲ့သူ၊ အကြမ်းဖက် မဲ့သူ၊ အဆိပ်ခက်မဲ့သူဆိုပြီး ဖမ်းဆီးသတ်ဖြတ်နေတဲ့အချိန်ပါ။
ကံဆိုးစွာနဲ့ ဒလသား ငါးယောက်မှာ ဗိုလ်တစ်ထောင်သား ၃၀ လောက်ရဲ့ ဖမ်းဆီးမှုကို ခံရလိုက်ပါတယ်။ သုံးယောက်ကတော့ ရေထဲခုန်ချပြီး ထွက်ပြေးသွားပါတယ်။ ဖမ်းခံရတဲ့ ဒလမြို့သား ငါးယောက်ကို သမ္မတကမ်းခြေ အနီးက ဆိပ်ခံဗောတံတားပေါ်မှာ စစ်မေးကြပါတယ်။ ဖမ်းမိသူ ငါးယောက်လုံးက ဒလမြို့သားများဖြစ်ကြောင်း၊ မီးရှို့ဖို့ လာသူ မဟုတ်ကြောင်း၊ မီးရှို့ဖို့ ဘာပစ္စည်းမှ မပါကြောင်း ပြောပေမယ့် ဒေါသ ထွက်နေတဲ့ လူအုပ်ကြီးက တစ်ယောက် တစ်မျိုးအော်လိုက်၊ တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက် ခေါင်းကို ရိုက်လိုက်၊ ရင်ဘက်ကို ကန်လိုက်နဲ့ ဆူညံနေပါတယ်။ အစကတည်းက ဒေါသထွက်နေတဲ့ လူအုပ်ကြီးက မေး ရင်းမေးရင်း အလိုလိုဒေါသ ပိုထွက် လာပါတယ်။ အဲဒီနောက် တစ်ဦးက စ ပြီး ပါလာတဲ့ ရဲဒင်း နဲ့ စခုတ်လိုက်ချိန်မှာ နောက်လူတွေကလည်း ဓားနဲ့ ဝိုင်းခုတ်ကြပါတယ်။ မသေမရှင် ဖြစ်နေချိန်မှ တစ်ယောက်ချင်း တံတားစွန်း တရွတ်တိုက်စွဲသွားပြီး ခေါင်းကို သေသေချာချာ လှီးဖြတ်ပါတယ်။ အဲဒီနောက် ၅ ယောက်လုံးကို တံတားပေါ်က ပစ်ချပြီး ရေထဲချလိုက်ပါတယ်။ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပါပဲ အဲဒီအလောင်း တွေထဲက အစိတ်အပိုင်းအများစုက ဒလဘက်က ကမ်းမှာ လာကပ်ပြီး ပုပ်ပွနေခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီချိန်တုန်းက ဒလမြို့သားတွေအားလုံး ဒီဖြစ်စဉ်ကို သိကြပါတယ်။ သူတို့တွေကို ရှစ်လေးလုံး အကြောင်းမေးရင် ပြန်မပြောချင်ကြပါဘူး။ ရှစ်လေးလုံးဆိုတာ တကယ့် အနိဌာရုံတစ်ခုလို့သာ မှတ်ချက် ပေးကြပါ တယ်။ ဒီလိုဖြစ်ရပ်မျိုးကို အိပ်မက်ထဲမှာတောင် ပြန်မတွေ့လိုကြတော့ပါဘူး။ ဒီဖြစ်စဉ်မျိုးတွေဟာ အဲဒီကာလက နေရာအနှံ့မှာ ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ အထူးသဖြင့် ရန်ကုန်တစ်မြို့ လုံးမှာ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ရှစ်လေးလုံးကာလက ထဲထဲဝင်ဝင် လှုပ်ရှားခဲ့ဖူးသူ အားလုံးက ဒီလိုဖြစ်စဉ်တွေကို ပိုသိကြပါတယ်။ ဒီလိုမေ့ပစ်စရာကောင်းတဲ့ အတိတ်ဆိုးမျိုးကို စာစီကုံးပြီး ခမ်းခမ်းနားနား ကျင်းပနေကြတဲ့ သူတွေကိုလည်း စိတ်ပျက်ပါတယ်။ ရှစ်လေးလုံးဆိုတာ အရေးတော်ပုံပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အရေးအခင်းပဲဖြစ်ဖြစ် ဘယ်လိုပဲ ခေါင်းစဉ်တပ်ပါစေ ၊ ဘယ်လိုပဲ ပိတ်ကားလှလှတွေ ဆင်ထားပါစေပိတ်ကားနောက် မှာတော့ သွေး သံရဲနေတဲ့ အပြစ်မဲ့ပြည်သူများရဲ့ ခေါင်းပြတ်တွေ တန်းစီပြီး ရှိနေတယ်ဆိုတာ ဘယ်သူမှ ငြင်းလို့မရ ပါဘူး…..။
ကင်တာနား၏ ယာဉ်တန်းအား တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းမှာ မဟုတ်မှန်ကြောင်း အစိုးရ၊ မျက်မြင်သက်သေများနှင့် မိတ္ထီလာ ဒေသခံများ ပြောကြား
Posted by drmyochit Thursday, August 22, 2013, under ပြည်တွင်းသတင်းများ | No comments
သြဂုတ် ၂၁ ရက်က ရန်ကုန်လေဆိပ်တွင် ပြုလုပ်သည့် သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲတွင် ကင်တားနားအား တွေ့ရစဉ်
သြဂုတ် ၁၉ ရက် ည ၁၀ နာရီခန့်က မိတ္ထီလာမြို့တွင် ၎င်းစီးနင်းလာသော မော်တော်ယာဉ်အား လူ အယောက် ၂၀၀ ခန့်က ၀ိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ကာ တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြသည် ဟူသော ကုလသမဂ္ဂ၏ မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေး အထူးကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာကင်တားနား၏ ပြောကြားချက်မှာ မဟုတ်မှန်ကြောင်း အစိုး ရ၊ အဆိုပါ ယာဉ်တန်း ဖြတ်သန်းသွားချိန်တွင် ရှိနေခဲ့သော မျက်မြင် သက်သေများနှင့် မိတ္ထီလာမြို့ ခံများ က ငြင်းဆိုခဲ့ကြသည်။
ကုလသမဂ္ဂ၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေး အထူးကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာ ကင်တားနားသည် သြဂုတ် ၂၁ ရက် ညပိုင်းက မြန်မာနိုင်ငံမှ မထွက်ခွာမီ ရန်ကုန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်၌ ပြုလုပ်သော သတင်း စာ ရှင်းလင်းပွဲတွင် မိတ္ထီလာ၌ မိမိစီးနင်းလာသော မော်တော်ကားအား လူ ၂၀၀ ခန့်က ထု ရိုက်ခြင်း၊ တံခါးနှင့် ပြတင်းပေါက်များကို ကန်ကျောက်ခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း၊ အနားတွင်ရှိသော ရဲတပ် ဖွဲ့၏ အကာ အကွယ် လုံးဝမရှိသည့် အခြေအနေတွင် ခံစားရသော အကြောက်တရားသည် ပြီးခဲ့သော မိတ္ထီ လာ အကြမ်း ဖက်မှု၌ ဒေါသထွက်နေသော လူအုပ်က လူ ၄၃ ဦးကို ရိုက်နှက်ပြီး မီးရှို့သတ်ဖြတ် ခဲ့သည် ကို ရဲတပ်ဖွဲ့က ရပ်ကြည့်နေသည် ဆိုသော စွပ်စွဲမှုကို သွားမြင်မိသည်ဟု ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ထည့် သွင်း ဖော်ပြသွားခဲ့သည်။
နိုင်ငံတော် သမ္မတ၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးရဲထွဋ်က မိတ္ထီလာမြို့တွင် လူ ၂၀၀ ခန့်က မစ္စတာ ကင်တားနားထံ ကန့်ကွက်စာနှင့် တီရှပ်ပေးရန် ကြိုးစားခဲ့ခြင်းသာဖြစ်ပြီး ၎င်း၏ မြန်မာနိုင်ငံ ခရီးစဉ်အတွင်း အသက်အန္တရာယ် စိုးရိမ်ရလောက်သည့် အခြေအနေ လုံးဝမရှိခဲ့ကြောင်း အေပီ သတင်းဌာနသို့ ပြောကြားခဲ့သည်။ မိတ္ထီလာမြို့သို့ ဖြတ်သန်းစဉ် မစ္စတာကင်တားနား၏ မော်တော်ယာဉ်တန်းအား ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ကားတစ်စီးက ရှေ့ပြေးအဖြစ် ဦးဆောင်ပေးခဲ့ကာ လုံခြုံရေး ယာဉ်တစ်စီး လိုက်ပါပေးခဲ့ကြောင်း ဆန္ဒပြမှုများ ရှိနိုင်သည် ဆိုသောကြောင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် ၃၀ ကလည်း လုံခြုံရေး ဆောင်ရွက် ပေးခဲ့ကြောင်း၊ လူထုအနေဖြင့် ကင်တားနားအား နာကျင်စေရန် ရည်ရွယ် လုပ်ဆောင်မှု မရှိခဲ့ကြောင်း၊ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၏ ဦးဆောင်မှုဖြင့် ယာဉ်တန်းသည် လူအုပ်အား အန္တရာယ်မရှိဘဲ ဖြတ်သန်း နိုင်ခဲ့ကြောင်း ဦးရဲထွဋ်၏ ပြောကြားချက်ကို အေပီသတင်းဌာနက ဖော်ပြခဲ့သည်။
ယင်းအဖြစ်အပျက် ဖြစ်ပျက်ချိန်၌ Eleven Media Group ၏ သတင်းထောက်နှင့် အစိုးရ သတင်းစာမှ သတင်းထောက်တို့ အဆိုပါ နေရာတွင် ရှိနေပြီး လူထုအနေဖြင့် မစ္စတာ ကင်တားနား စွပ်စွဲထားသလို လုပ်ဆောင်မှု လုံးဝမရှိခဲ့ကြောင်း ပြောကြားသည်။
''ညနေ ငါးနာရီ လောက်ကတည်းက ကင်တားနားကို ဆန္ဒပြဖို့ စောင့်နေကြတာ လူတစ်ထောင်လောက် ရှိတယ်။ ညမထွက်ရ အမိန့်ကြောင့် ပြန်သွားကြလို့သာ သူရောက်လာတဲ့ အချိန်မှာ ၂၀၀ လောက်ပဲ ကျန်တော့တာ။ ယာဉ်တန်း ဖြတ်သွားတာ စက္ကန့်ပိုင်းပဲ ကြာပါတယ်။ ပိုစတာတွေကိုင်ပြီး ဆန္ဒပြကြသလို သူ့လုပ်ရပ်တွေကို ကန့်ကွက်ကြောင်း ကန့်ကွက်စာနဲ့ တီရှပ်ပေးတာပဲ ရှိပါတယ်။ သူပြောသွားသလို ကားကိုထုရိုက်တာ၊ တံခါးနဲ့ ပြတင်းပေါက်ကို ကန်ကျောက်တာမျိုး လုံးဝမလုပ်ကြပါဘူး'' ဟု Eleven Media Group ၏ မိထ္ထီလာ သတင်းထောက် ကိုဝဏ္ဏစိုးက ပြောကြားသည်။
မစ္စတာ ကင်တားနား အနေဖြင့် သြဂုတ် ၂၁ ရက်က ရန်ကုန်လေဆိပ်တွင် ပြုလုပ်သော သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲတွင် မိတ္ထီလာမြို့မှ အဖြစ်အပျက်ကို ပြောကြားရာ၌ စိတ်လှုပ်ရှားမှု လွန်ကဲသည့် ပုံစံမျိုး ဖြစ်နေကြောင်း အဆိုပါ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲကို တက်ရောက်ခဲ့သည့် သတင်းထောက်တစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့ပြီး ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေ ညီလာခံတွင် ၎င်းတင်သွင်းမည့် အစီရင်ခံစာကြောင့် OIC အပါအ၀င် နိုင်ငံတကာ အစ္စလာမ် အသိုင်းအ၀ိုင်းက မြန်မာအစိုးရအပေါ် ဖိအားပေးလာမည်ကို စိုးရိမ်မိကြောင်း...
ကိုဝဏ္ဏစိုးသည် မတ်လအတွင်းက ဖြစ်ပွားခဲ့သော မိတ္ထီလာ အကြမ်းဖက်မှု ဖြစ်စဉ်များတွင် နေ့စဉ်သတင်း ပေးပို့ခဲ့သူဖြစ်ပြီး အစုအလိုက် အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ်မှုများ ရပ်တန့်သွားစေရန် Eleven Media Group ၏ ကြိုးစားဖော်ပြခဲ့သော သတင်းများတွင် ၎င်း၏ဆောင်ရွက်ချက်များမှာ အရေးပါသော နေရာမှ ပါဝင်ခဲ့သည်။ ယခုဖြစ်စဉ်တွင်လည်း ည နေ ၅ နာရီခန့် ကတည်းက လူစုလူဝေးရှိသည့် နေရာတွင် ရောက်ရှိနေခဲ့ပြီး သတင်းရယူရန် စောင့်ဆိုင်းနေခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ မစ္စတာ ကင်တားနား အနေဖြင့် ၎င်းအား ဆန္ဒပြမည့်သူများ စောင့်နေသည့်လမ်းမှ မြို့တွင်းသို့ ၀င်ခဲ့ခြင်းကြောင့်သာ ယခုကဲ့သို့ ကန့်ကွက် ဆန္ဒပြသူများနှင့် ရင်ဆိုင်ခဲ့ရခြင်းဖြစ် အခြားလမ်း တစ်လမ်းဖြစ်သည့် သီးကုန်းလမ်းမှသာ မြို့တွင်းသို့ ၀င်ရောက်ခဲ့မည် ဆိုပါက ဆန္ဒပြသူများနှင့် တွေ့ရမည် မဟုတ်ကြောင်း ကိုဝဏ္ဏစိုးက ပြောကြားသည်။
''မိတ္ထီလာ တံတားထိပ်ကို ရောက်လာတဲ့ အချိန်မှာ ကင်တားနားကို ကန့်ကွက် ဆန္ဒပြနေတဲ့လူ ၁၅၀ ကျော်လောက် ရှိပါတယ်၊ ပထမဆုံး ဖြတ်လာတဲ့ကားမှာ မစ္စတာ ကင်တားနား ပါလာတယ် ထင်ကြတယ်။ နောက် မစ္စတာကင်းတားနားကား ဖြတ်သွားတဲ့ အချိန် မှာ ဆန္ဒပြနေတဲ့ လူအုပ်က သူတို့ကိုင်ထားတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်တွေကို မြင်စေချင်လို့ ရှေ့တိုးလာတယ်။ ဒါပေမဲ့ ယာဉ်ထိန်းရဲနဲ့ မြို့ခံတွေက လမ်းရှင်းပေးလိုက်တယ်။ တံတားထိပ်မှာ သုံးမိနစ်တောင် မကြာပါဘူး။ လူအုပ်က ဆန္ဒပြတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်ကို မြင်စေချင်တာရယ်၊ ကန့်ကွက်တဲ့ အသံကို ကြားစေချင်တာရယ်ပဲ ရှိပါတယ်။ အန္တရာယ် တစ်စုံတစ်ရာ မပြုလုပ်ခဲ့ပါဘူး။ ကားတန်းက တစ်မိနစ်လောက် တုံ့ဆိုင်းသွားပြီး ဆက်လက် ထွက်ခွာသွားပါတယ်။ နောက်ပိုင်း ဆက်သွယ်ရေးရိပ်သာကို မြို့ခံသုံးယောက် လိုက်သွားပြီး အိတ်ဖွင့် ပေးစာတစ်စောင် ပေးခဲ့ပါတယ်။ အဆင့်ဆင့် သတင်းပို့ပြိးတော့ ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက သူတို့ ပေးလိုက်ပါမယ်ဆိုလို့ စာကို သူတို့လက်ထဲ အပ်ခဲ့ပါတယ်။ သူ့ကိုပေးတဲ့ ကန့်ကွက်စာထဲမှာ ကုလသမဂ္ဂကို တင်သွင်းတဲ့ သူရဲ့အစီရင် ခံစာတွေကို သဘောမတူကြောင်းနဲ့ မတ်လအတွင်း မိတ္ထီလာမြို့မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ အကြမ်းဖက်မှုက သံဃာတော် တစ်ပါးကို အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်တွေက သတ်ဖြတ်လိုက်လို့ စတင်ခဲ့ရခြင်း ဖြစ်တယ်။ နောက်မင်္ဂလာဇေယုံထဲက အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်တွေက တစ်ညလုံး အော်ဟစ်ကြိမ်းမောင်းပြီး ရန်စခဲ့တဲ့အတွက် အခြေအနေက ပိုဆိုးသွားတယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်းတွေ ပါပါတယ်'' ဟု ကိုယ်တွေ့ကြုံခဲ့သူ မိတ္ထီ လာမြို့ခံ ဒေါ်မေသက်ဦးက ပြောကြားသည်။
မိတ္ထီလာမြို့ခံ တစ်ဦးဖြစ်သူ ကိုဒီမောဆိုးကလည်း ''ဆန္ဒပြတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်ကို မြင်စေချင်တာရယ်၊ ကန့်ကွက်တဲ့ အသံကို ကြားစေချင်တာရယ်ပဲ ရှိပါတယ်။ အန္တရာယ် တစ်စုံတစ်ရာ မပြုလုပ်ခဲ့ပါဘူး။ ကားတန်း တစ်မိနစ်လောက် တုံ့သွားတာဘဲ ရှိပါတယ်။ ဘာမှ ဆိုးဆိုးရွားရွား ဖြစ်ခဲ့တာ မရှိပါဘူး'' ဟု ပြောကြားသည်။
''ကိုမယ်ပ၊ ကိုဒီမောဆိုးနဲ့ ဒေါ်မေသက်ဦးတို့က ဆက်သွယ်ရေး ရိပ်သာကိုသွားပြီး ကန့်ကွက်စာ ပေးခဲ့ကြပါတယ်။ တစ်မြို့လုံးရဲ့ ခံစားချက်ကို သိစေချင်လို့ အခုလို ဆန္ဒပြကြတာ ဖြစ်ပေမယ့် သူ့အသက် အန္တရာယ်ကို ထိခိုက်အောင်လုပ်ဖို့ ဘယ်သူမှ ရည်ရွယ်ချက် မရှိကြဘူး။ ဆိုင်ဘုတ်တွေကလွဲလို့ ဘာလက်နက်မှလည်း ကိုင်ဆောင် မထားကြပါဘူး'' ဟု မိတ္ထီလာမြို့ခံ တစ်ဦးဖြစ်သည့် ကိုထိန်ဝင်းမွန်ကလည်း ပြောကြားသည်။
သြဂုတ် ၁၉ ရက်က မိတ္ထီလာမြို့တွင်းသို့ ၀င်လာသော မစ္စတာ ကင်တားနား၏ ယာဉ်တန်းနှင့် ကန့်ကွက်သူ အချို့ကို တွေ့ရစဉ်
''ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး ကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာ ကင်တားနားလာမယ့် နေ့ခင်းပိုင်းထဲက မိတ္ထီလာ တံတားထိပ်မှာ လုံခြုံရေး ချထားပါတယ်။ ညနေ ၆ နာရီကစပြီး အရပ်ဝတ်နဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် ၁၀ ယောက်ကို တံတားထိပ်မှာ လုံခြုံရေး ထပ်ချပါတယ်။ တံတားနားမှာတင် နောက်ထပ် ယူနီဖောင်းဝတ် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် ၁၀ ဦး ရှိပါတယ်။ တံတားနဲ့ မနီးမဝေးမှာ ကားနဲ့အသင့် နေရာယူထားတဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် ၁၀ ဦးရှိပါတယ်။ ကားပေါ်မှာပါတဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကို ဖွဲ့စည်းပုံအပြည့် လက်နက်တပ်ဆင် ထားပါတယ်။ ဖောင်တော်ဦး တံတားထိပ်မှာ ယာဉ်ထိန်းနှစ်ယောက် လမ်းရှင်းပေးနေပါတယ်။ မစ္စတာ ကင်တားနားလာတဲ့ ယာဉ်တန်းမှာ နယ်/လုံဝန်ကြီး ဗိုလ်မှုးကြီး အောင်ကျော်မိုးကိုယ်တိုင် လိုက်ပါလာပါတယ်။ နောက် မိတ္ထီလာခရိုင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးတင်မောင်စိုးနဲ့ အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့တွေလည်း လိုက်ပါလာပါတယ်။ ယာဉ်တန်းမှာ မိတ္ထီလာခရိုင် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ရဲမှူးကြီးစပ်နေလင်း ကိုယ်တိုင် လိုက်ပါလာပါတယ်။ ခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှုးရဲ့ ကားပေါ်မှာ ဖွဲ့စည်းပုံအပြည့် လက်နက် တပ်ဆင်ထားတဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် ခုနှစ်ဦး လိုက်ပါလာပါတယ်။ ကားတန်းက မိတ္ထီလာ တံတားထိပ်ကို ည ၁၀ နာရီ ၃၅ မိနစ်မှာ ရောက်ပါတယ်။ မိုင်ဝက်ကျော်ဝေးတဲ့ ဆက်သွယ်ရေး ရိပ်သာကို နောက်ငါးမိနစ် အတွင်းမှာ ရောက်ရှိပါတယ်။ ဆက်သွယ်ရေး ရိပ်သာကနေ ည ၁၀ နာရီ ၅၅ မိနစ်မှာ ပြန်လည် ထွက်ခွာသွားပါတယ်။ ကားပေါ်က ဆင်းတဲ့အချိန်က ၁၀ မိနစ်တောင် မရှိပါဘူး။ ကျန်တဲ့အချိန်က ကားပေါ်မှာ ထိုင်နေပါတယ်။ တစ်စုံတစ်ရာလည်း အန္တရာယ် မဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါဘူး'' ဟု မိတ္ထီလာမြို့မှ လုံခြုံရေး တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးမှ ပြောကြားသည်။
''ကျွန်တော် မြင်တာကတော့ ပထမဆုံး ကားဝင်တဲ့ အချိန်မှာ လူအုပ်က လမ်းပေါ်တိုးလာပြီး ဆန္ဒပြကြပါတယ်။ အဲဒီကားပေါ်မှာ မစ္စတာကင်တားနား မပါလာပါဘူး။ ချက်ချင်းပဲ ယာဉ်ထိန်းနဲ့ မြို့ခံတွေက လမ်းရှင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ နောက်ကားတွေကျတော့ လူအုပ်က ဆိုင်းဘုတ်ကို မြင်စေချင်လို့ ရှေ့တိုးနေပေမယ့် ယာဉ်ထိန်းရဲ၊ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ မြို့ခံတွေက ရှေ့ကနေ လမ်းရှင်းပေးလိုက်တဲ့ အတွက် ချက်ချင်း ဆက်ထွက်သွား နိုင်ပါတယ်။ ကားတန်းနောက်ကို မော်တော်ဆိုင်ကယ်တွေနဲ့ လိုက်သွားပြီး ဆက်သွယ်ရေး ရိပ်သာနားမှာ ''ကင်တားနား အလိုမရှိ၊ အလိုမရှိ'' ဆိုတာ အော်ကြပါတယ်။ ဆိုင်ကယ်အစီး ၂၀ လောက်နဲ့ လူ ၄၀ လောက်ရှိမယ် ခန့်မှန်းပါတယ်။ အန္တရာယ် တစ်စုံတစ်ရာ မဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါဘူး။ ကားဖြတ်သွားတဲ့ အချိန်မှာ ကားကိုလက်နဲ့ လှမ်းပုတ်တာ အနည်းအကျဉ်း ရှိပေမယ့် အန္တ ရာယ် တစ်စုံတစ်ရာ ဖြစ်အောင် ပုတ်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုင်ထားတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်ကို မြင်စေချင်တာရယ်၊ ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြနေကြတဲ့ အသံကို ကြားစေချင်လို့ ပုတ်ကြတဲ့ သဘောပါပဲ။ လူအုပ်က ကန့်ကွက်တာကို မြင်စေချင်လို့ ရှေ့ကိုတအား တိုးနေတာပဲ ရှိပါတယ်။ အန္တရာယ် ပြုချင်လို့ မဟုတ်ပါဘူး။ နောက်ပြီးတော့ မန္တလေးကလာတဲ့ အချိန်မှာ မိတ္ထီလာကို ကံကောင်း လမ်းခွဲကနေဆင်းပြီး ၀င်လာတဲ့အတွက် တံတားထိပ်ကိုဖြတ်ရလို့ လူအုပ်နဲ့ တွေ့ရတာပါ။ မိတ္ထီလာမြို့ကို သီးကုန်းလမ်းခွဲကနေ ၀င်လာရင် တံတားထိပ်ကို ဖြတ်စရာ မလိုပါဘူး။ တံတားထိပ်ကို မဖြတ်ရရင် လူအုပ်နဲ့လည်း တွေ့စရာမရှိပါဘူး။ လူအုပ်က ညနေ ၆ နာရီထဲက တံတားထိပ်ကို ရောက်တာပါ။ ည ၁၀ နာရီကျော်မှ ကားတန်းက မိတ္ထီလာကို ရောက်တာပါ။ အခြားလမ်းက လာခဲ့ရင် ဆက်သွယ်ရေး ရိပ်သာကို တန်းရောက်ပါတယ်။ လူအုပ်နဲ့ တွေ့စရာ မလိုပါဘူး။ ခရီးအကွာအဝေးလည်း အတူတူ လောက်ပါပဲ'' ဟု Eleven Media Group သတင်းထောက် ကိုဝဏ္ဏစိုးမှ ပြောကြားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရှစ်ကြိမ်မြောက်အဖြစ် လာရောက်သော မစ္စတာ ကင်တားနား အနေဖြင့် သြဂုတ် ၂၁ ရက်က ရန်ကုန်လေဆိပ်တွင် ပြုလုပ်သော သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲတွင် မိတ္ထီလာမြို့မှ အဖြစ်အပျက်ကို ပြောကြားရာ၌ စိတ်လှုပ်ရှားမှု လွန်ကဲသည့် ပုံစံမျိုး ဖြစ်နေကြောင်း အဆိုပါ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲကို တက်ရောက်ခဲ့သည့် သတင်းထောက်တစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့ပြီး ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေ ညီလာခံတွင် ၎င်းတင်သွင်းမည့် အစီရင်ခံစာကြောင့် OIC အပါအ၀င် နိုင်ငံတကာ အစ္စလာမ် အသိုင်းအ၀ိုင်းက မြန်မာအစိုးရအပေါ် ဖိအားပေးလာမည်ကို စိုးရိမ်မိကြောင်းလည်း ပြောကြားသည်။
ကုလသမဂ္ဂ၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ် ကင်တားနားသည် ၁၉၈၂ ခုနှစ် နိုင်ငံသား ဥပဒေကို ပြင်ဆင်ရန် ပြောကြားထားသူဖြစ်ပြီး ယင်းဥပဒေသာ မရှိတော့ပါက ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံဖက်မှ ခိုးဝင်နေသူများ၏ အန္တရာယ်ကို ရင်ဆိုင်ရမည် ဖြစ်သောကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံသားများ အကြားတွင် ကင်တားနားအား ယုံကြည်သူ နည်းပါကြောင်း သိရသည်။
မီးသင်္ဂြိုလ်စက် စည်ပင်ကသိမ်းမည်ဟု သတင်းထွက်ပေါ်သောကြောင့် အဆင်မပြေနိုင်ကြောင်း မြို့မိမြို့ဖများ ဆွေးနွေး
မိုးညှင်း၊ သြဂုတ် ၂၂။
ကချင်ပြည်နယ်၊ မိုးညှင်းမြို့တွင် ပြည်ထောင်စု သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် သံဃနာယက ဆရာတော် ဘဒ္ဒစန္ဒိမာ ဦးစီး၍ ဒေသခံ ပြည်သူများထံမှ အလှူငွေ ကောက်ခံ၍ လူသေအလောင်းများ မီးသင်္ဂြိုလ်ရန် မီးသင်္ဂြိုလ်စက်ကို တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး အခမဲ့ မီးသင်္ဂြိုလ်ပေးလျက်ရှိရာ ယခုအခါ မြို့တော်စည်ပင်မှ သိမ်း၍ အခကြေးငွေဖြင့် သင်္ဂြိုလ်ရမည်ဟု သတင်းများ ထွက်ပေါ်လျက်ရှိရာ မြို့တွင်းရှိ အခြေခံ လူတန်းစားများအတွက် အဆင်မပြေမည်ကို မြို့မိမြို့ဖများက စိုးရိမ်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
သြဂုတ်လ (၁၉)ရက်နေ့ မြို့နယ်စည်ပင် သာယာရေးအဖွဲ့မှ ကြော်ငြာစာအမှတ်(၁၁/၂၀၀၁၃)ဖြင့် အများသိစေရန် ကြေညာခဲ့သည်။ မြိုနယ်စီမံ ခန့်ခွဲရေး ကော်မီတီ၏ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း အစည်းဝေး တင်ပြချက်အရ ကချင်ပြည်နယ် စည်ပင်ဥပဒေပုဒ်မ၁၄၊ ပုဒ်မခွဲ(၁၁)၊ ပုဒ်မ၆၉၊ ပုဒ်မခွဲ(က)၊ (ခ)၊ (ဂ)အရ မြို့နယ်စည်ပင်နယ်နမိတ်အတွင်း သုဿာန်များနှင့် ပတ်သက်သော အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ(ByLaws)အား ရေးဆွဲထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ကန့်ကွက်လိုလျှင်(၁၅)ရက်အတွင်း ကန့်ကွက်နိုင်ကြောင်း ကြေညာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ စည်ပင်(By Laws)ထဲတွင် (၃၀၀၀၀)ကျပ် ပေးရမည်ဟု ဆိုထားခြင်းဖြစ်သည်။
“ပြည်နယ်ဝန်ကြီး ဦးညွန့်အောင်ဆီတော့ ဆရာတော်က ဖုန်းဆက်ထားတယ်။ ခယက၊ မယက၊ စည်ပင်အရာရှိတွေနဲ့တွေ့ပြီး ပြန်ညှိနှိုင်းရဦးမယ်”ဟု မြို့မိမြို့ဖတစ်ဦးက ပြောသည်။
“ကျမတို့ကို ဆရာတော်သံဃာတော်တွေ ဦးဆောင်ပြီး ကိုယ်ထူကိုယ်ထ အလှူခံ၊ အလှူရှင်တွေရှာပြီး မြို့အတွက် အဆင်ပြေအောင် မီးသင်္ဂြိုလ်စက်ကို ဆောက်ပေးထားတာ။ လူသေပိုင်ရှင်ဆီမှာ ဘာမှမတောင်းဘဲ မီးသင်္ဂြိုလ်ပေးတာ။ ဆရာတော်ကြီးရဲ့ မေတ္တာကြောင့် အလှူရှင်တွေက ပေါပါတယ်။ ဆရာတော်တွေ ဦးဆောင်ကြလို့သာ အလှူငွေတွေ ရကြတာ။ စည်ပင်ကမီးသင်္ဂြိုလ်စက်ကို ကိုင်တွယ်မယ်ဆိုရင် အလှူရှင်တွေက မလှူကြတော့ဘူးလို့ ပြောကြတယ်။ စည်ပင်က သိမ်းယူလိုက်ရင် သေဆုံးသူ ဆင်းရဲသားတွေအတွက် အဆင်ပြေပါ့မလား” ဟု မြို့မိမြို့ဖ အမျိုးသမီးတစ်ဦးက ပြောသည်။
ဗီဇာသက်တမ်းကိစ္စ အလုပ်သမားတွေသိအောင် ဥပဒေ ထုတ်ပြန်ဖို့ တောင်းဆို
Posted by drmyochit Thursday, August 22, 2013, under ပြည်ပရောက်မြန်မာသတင်းများ | No comments
ထိုင်းနိုင်ငံတွင်းမှာ ​တရားဝင်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့် ​ဗီဇာ ​သက်တမ်း ​၄နှစ်ပြည့်သွားတဲ့ ​ရွှေ့ ​ပြောင်း အလုပ် သမားတွေ အတွက် ​ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့ ​ဥပဒေတရပ်ထုတ်ပြန်ပေးဖို့ ​အလုပ်သမားအဖွဲ့အ ​စည်းတွေက ​ထိုင်းနဲ့ ​မြန်မာ အစိုး ရတွေ ကို ​တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံ ချင်းမိုင်မြို့ရှိ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမား တချို့ (Credit: ABC)
ထိုင်းအစိုးရရဲ့ ​ထုတ်ပြန်ချက်အရ ​၄နှစ်ဗီဇာပြည့်သွားတဲ့ ​အလုပ်သမားတွေအနေနဲ့ ​နေရပ်မှာ ​၃နှစ် ​ပြန်နေပြီးမှ ​ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်း ​အလုပ်လုပ်ခွင့် ​ဗီဇာ ​ထပ်ထုတ်ပေးမယ်လို့ ​ပြောခဲ့တဲ့အတွက် ​အကယ်လို့ ​ဒီအတိုက် ​ဆက်သတ်မှတ်မယ်ဆိုရင် ​အားလုံး ​သိအောင် ​ထုတ်ပြန်ပေးဖို့ ​တောင်းဆိုတာလို့ ​ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမား ​အခွင့်အရေး ​ကွန်ယက်အဖွဲ့ ​ဥက္ကဌ ​ဦးအောင်ကျော်က ​ပြောပါတယ်။
မြန်မာအစိုးရနဲ့ ​ထိုင်းအစိုးရ ​သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးမှ ​ယာယီနိုင်ငံကူးလက်မှတ်တွေ ​ထုတ်ပေးတဲ့ ​အစီအစဉ်ကို ​ကျနော်တို့လုပ်ခဲ့တဲ့အခါမှာ ​ထိုင်းနိုင်ငံအစိုးရက ​၄နှစ်ပဲ ​နေထိုင်ခွင့်ပြုမယ်လို့ ​ဥပဒေမှာသတ်မှတ် ​ထားပါတယ်၊ ​အခုက ​၄နှစ်ပြည့်သွားပြီးတဲ့အချိန်မှာ ​ရှေ့ဆက်ပြီးအသစ်မှတ်ပုံတင်ဖို့အတွက် ​ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်၊ ​ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကို ​ထိုင်းနိုင်ငံအစိုးရက ​ဥပဒေတရပ်အနေနဲ့ ​သတင်းမထုတ်ပြန်တဲ့ ​အတွက်ကြောင့် ​ကျနော်တို့ ​အလုပ်သမားအဖွဲ့ ​၄ဖွဲ့ ​ပေါင်းပြီး ​ထုတ်ပြန်လိုက်ခြင်း ​ဖြစ်ပါတယ်။ ​
လောလောဆယ်မှာတော့ ​ဗီဇာသက်တမ်းပြည့်သွားတဲ့ ​အလုပ်သမားတွေ ​သိန်းဂဏန်းလောက်ရှိနိုင်ပြီး ​တချို့က ​နောက်ထပ်စာအုပ် ​အသစ်လုပ်ဖို့ ​ကြိုးစားနေ ​တာတွေရှိသလို ​တချို့ကလည်း ​အိမ်ပြန်သွားတာ ​တွေရှိတဲ့အတွက် ​နောက်ထပ်ဗီဇာ ​ရရှိဖို့ ​ဘယ်လိုလုပ်ဆောင် ​ရမယ်ဆိုတာကို ​ အလုပ်သမား၊ ​အလုပ်ရှင်တွေ ​အားလုံးသိအောင် ​တရားဝင် ​ကြေညာပေးမှသာ ​ပွဲစားတွေရဲ့ ​လိမ်ညာမှု ​မခံရမှာဖြစ်တယ်လို့ ​ပြောပါတယ်။
ကျန်းမာရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုနဲ့ ​ပတ်သက်ပြီး ​ထိုင်းအလုပ်သမားတွေနဲ့ ​မြန်မာလို ​တခြားနိုင်ငံက ​အလုပ်သမားတွေအကြား ​အခွင့်အရေးတန်းတူရရှိမှာ ​ဖြစ်တယ်လို့ ​ပြောပေမဲ့ ​တကယ်ခံစားခွင့်ရရှိတဲ့သူက ​အနည်းအကျဉ်းပဲ ​ရှိတယ်လို့ ​ကိုအောင်ကျော်က ​ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်း ​ရေဒီယိုသြစတြေးလျ ​သတင်းထောက် ​မြတ်မိုးက ​သတင်းပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။ ​
Posted by drmyochit Thursday, August 22, 2013, under သတင်းများ | No comments
အသက်မပြည့်သေးသည့် မိန်းကလေးငယ်ကို ခိုးယူပေါင်းသင်းသည်ဟု စွပ်စွဲကာ လူငယ်တစ်ဦးကို တိုင်တန်းလာ သည့် အမှုတစ်ခုကို ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ် ရဲစခန်းက သြဂုတ် ၂၀ ရက်၌ အမှုဖွင့်ထားကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်း ရဲတပ်ဖွဲ့က မှုခင်းသတင်းထုတ်ပြန်သည်။
မိန်းကလေးငယ် ပျောက်ဆုံးသွားသည်မှာ ငါးရက်ကြာမ...ှ သူမကို အသက် ၁၉ နှစ်အရွယ် လူငယ်တစ်ဦးက ခိုးယူပေါင်းသင်းနေသည်ကို မိဘများကသိရှိပြီး ယခုလို ရဲစခန်း၌ အမှုဖွင့်တိုင်တန်းလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ရဲမှတ်တမ်းတွင်
မိန်းကလေးငယ်သည် စာအုပ်ငှားထွက်သွားရာမှ ပြန်မလာသဖြင့် သူမ၏အမဖြစ်သူက မိဘများကို ဖုန်းဆက် တိုင်ကြားရာ မိဘများက လိုက်လံရှာဖွေခဲ့ပြီး သူမကို အဆိုပါ လူငယ်က ပေါင်းသင်းရန် ခိုးယူထွက်ပြေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု သိရှိရသည်ဟု တရားလိုများက ရဲစခန်း၌ ထွက်ဆိုကြသည်။
အရွယ်မရောက်သေးသည့် မိန်းကလေးကို ပေါင်းသင်းမိသူအဖြစ် စွပ်စွဲပြီး ရဲစခန်း၌ တိုင်တန်းခံထားရသူမှာ ကိုကျော်သန့်ဇင်ဆိုသည့် လူငယ်ဖြစ်ပြီး ယခုအမှုကို မိန်းကလေး၏ မိခင်ဖြစ်သူက တရားလိုပြုလုပ် တိုင်တန်း ထားခြင်းဖြစ်သည်ဟု ရဲမှတ်တမ်းတွင် တွေ့ရသည်။
ယင်းအမှုကို ဒဂုံဆိပ်ကမ်း ရဲစခန်းက အမှုအမှတ်(ပ) ၂၈၄/၂၀၁၃ဖြင့် အမှုဖွင့်ထားပြီး စွပ်စွဲခံရသူ လူငယ်ကို ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးလျှက်ရှိရာ အမှုမြောက်ကြောင်း တွေ့ရှိလျှင် ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၃၆၃ ဖြင့် တရားစွဲမည်ဟု ရဲဌာနက သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင် ပါရှိသည်။
ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ အတိုက်အခံပါတီ ခေါင်းဆောင်တို့ ဒု-အကြိမ် စကားနိုင်လု
Posted by drmyochit Thursday, August 22, 2013, under နိုင်ငံတကာသတင်းများ | No comments
သြစတြေးလျနိုင်ငံမှာ ​ရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပခင် ​အဓိက ​နိုင်ငံရေးပါတီ ​နှစ်ခု ​ခေါင်းဆောင်တွေ ​တကြိမ်ထက် ​မနည်း ​စကားနိုင်လုကြမယ်လို့ ​ပြောဆိုကြတဲ့အတိုင်း ​မနေ့ညက ​ဒုတိယအကြိမ်မြောက် ​စကားနိုင်လုပွဲ ​ကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။
လက်ရှိဝန်ကြီးချုပ် ကယ်ဗင်ရဒ် (ဝဲ) နဲ့ အတိုက်အခံပါတီခေါင်းဆောင် တိုနီအာဘော့တ် (Credit: AAP)
စကားနိုင်လုပွဲအတွင်း ​အတိုက်အခံပါတီ ​ခေါင်းဆောင် ​တိုနီအာဘော့တ် ​ပြောသမျှကို ​ဝန်ကြီးချုပ်က ​မေးခွန်းတွေ ​ဆက်တိုက်မေးခဲ့တာကို ​အတိုက်အခံပါတီ ​ခေါင်းဆောင်က ​Does ​this ​guy ​ever ​shut ​up? ​ဒီလူ့နှယ် ​ပါးစပ်ပိတ်တတ်ရဲ့လား ​လို့ ​အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ ​တုန့်ပြန်ချက်နဲ့ ​တုန့်ပြန်ခဲ့တဲ့အတွက် ​ဝန်ကြီးချုပ်ကို ​ထောက်ခံသူတွေက ​အတိုက်အခံပါတီခေါင်းဆောင်ကို ​ဝေဖန်နေကြပါတယ်။
စကားနိုင်လုပွဲအတွင်း ​ခုလို ​ပြောဆိုခဲ့တာကို ​ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ​အတိုက်အခံပါတီ ​ခေါင်းဆောင်ဟာ ​စိတ်ထင်ရာ ​လုပ်မယ့် ​ပုဂ္ဂိုလ်၊ ​အနိုင်ပိုင်းချင်စိတ်သာ ​ရှိတဲ့ ​ပုဂ္ဂိုလ်လို့ ​ဝေဖန်ကြပါတယ်။
စကားနိုင်လုပွဲအတွင်း ​ဝန်ကြီးချုပ် ​ကယ်ဗင်ရဒ်က ​သူဦးဆောင်တဲ့ ​ပါတီကို ​မရွေးချယ်ပဲ ​အတိုက်အခံပါတီကို ​ရွေးချယ်မယ်ဆိုရင် ​အတိုက်အခံ ​ပေါ်လစီအရ ​လူတွေရဲ့ ​အနာဂတ်ကို ​ထိခိုက်မယ့်အကြောင်း၊ ​အလုပ်လက်မဲ့ ​ဦးရေ ​ပိုများလာပြီး၊ ​မရှိဆင်းရဲသားတွေ ​ကူညီထောက်ပံ့မှု ​ရရှိတာ ​နည်းပါးသွားမယ်လို့ ​ထိုးနှက် ​ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
အတိုက်အခံပါတီကတော့ ​သူတို့သာ ​အာဏာရမယ်ဆိုရင် ​စီးပွားရေး ​ကောင်းမွန်အောင် ​ပြုလုပ်မှာဖြစ်ပြီး ​လုပ်ငန်းခွင်က ​သားဖွားမိခင်တွေ ​အိမ်မှာ ​ကလေးငယ်တွေနဲ့ ​အတူအချိန်အကြာကြီး ​နေထိုင်နိုင်အောင် ​ဒေါ်လာ ​သန်းထောင်ချီတဲ့ ​ကူညီထောက်ပံ့မှုမျိုး ​ပြုလုပ်မယ်လို့ ​ပြောခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီလို ​သန်းထောင်ချီတဲ့ ​ငွေကြေးကို ​ဘယ်က ​ရအောင် ​လုပ်မလဲလို့ ​ဝန်ကြီးချုပ်က ​မေးခွန်းထုတ်ရာမှာ ​အတိုက်အခံပါတီက ​ကုမ္ပဏီကြီးဆီက ​ရတဲ့ ​အခွန်ငွေတွေနဲ့ ​ရရှိအောင် ​လုပ်မယ်လို့ ​ပြောခဲ့ပါတယ်။
တခါ ​ဝန်ကြီးချုပ်က ​အဲဒီအခွန်က ​ကုန်ကျစရိတ်ရဲ့ ​တစ်ဝက်လောက်ကိုသာ ​ကာမိမှာ ​ဖြစ်တဲ့အတွက် ​ငွေတွေရရှိအောင် ​ဘယ်လို့ ​လုပ်မလဲလို့ ​မေးခွန်းထုတ်ရာမှာ ​အတိုက်အခံဖက်က ​လူတွေ ​ဘဏ်မှာ ​စုထားတဲ့ ​အတိုးနှုန်းကရတဲ့ ​အခွန်တွေနဲ့ ​ပေးမယ်လို့ ​ပြောပါတယ်။
ဒါကို ​ဝန်ကြီးချုပ်က ​ဒီအခွန်တွေနဲ့လည်း ​လုံလောက်မှာ ​မဟုတ်ဘူးလို့ ​ထပ်ပြောတဲ့အခါ ​အတိုက်အခံပါတီက ​ခေါင်းဆောင်က ​ဒီလူ့နှယ် ​ပါးစပ်ပိတ်ထားတတ်ရဲ့လား ​ဆိုပြီး ​ပြောလိုက်ပါတယ်။
ဒီလို ​ကလေးဆန်ဆန် ​ပြောလိုက်တဲ့အတွက် ​ဝေဖန်ခံရပြီးနောက် ​အတိုက်အခံ ​ခေါင်းဆောင်က ​မီဒီယာတွေနဲ့ ​တွေ့ဆုံစဉ်မှာ ​သူခုလို ​ပြောလိုက်ရတာဟာ ​ဝန်ကြီးချုပ်ဖက်က ​ပြောဆိုမှု ​လေသံတွေက ​ရန်လိုတဲ့ ​လေသံတွေ ​ဖြစ်နေတာကြောင့် ​အဲလို ​ပြောဆိုတာလို့ ​တုန့်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
သြစတြေးလျနိုင်ငံမှာ ​စက်တင်ဘာလ ​၇ ​ရက် ​ကြရင် ​အထွေထွေ ​ရွေးကောက်ပွဲ ​ကျင်းပမှာ ​ဖြစ်ပါတယ်။
အောက်ပါရောဂါရှိသူ မိမိချစ်သူကို ကိုယ်ဝန်တားဆေးမတိုက်ပါနှင့်
Posted by drmyochit Thursday, August 22, 2013, under ကျန်းမာရေး | No comments
ရောဂါရှိသူများ ပဋိသန္ဓေ တားဆေး မစားသင့်ကြောင်း ကျန်းမာရေး သုတေသီများ၏ လေ့လာတွေ့ရှိချက် များအရ သိရှိရသည်။ အောက်တွင် ဖော်ပြရေးသားမည့် ရောဂါရှိသူများ ပဋိသန္ဓေတားဆေး သုံးစွဲရန် မသင့်ပေ။
(၁) သွေးပြန်ကြော ပိတ်ရောဂါ၊ ဦးနှောက် သွေးကြောကျဉ်း ရောဂါ၊ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်း ရောဂါ၊
(၂) သားမြတ်ကင်ဆာ ရောဂါရှိသူ
(၃) ဟိုမုန်း(Esirogen)မတည့်သော အကျိတ်ကင်ဆာရောဂါ၊
(၄) အကြောင်းမဲ့ မကြာခဏ သွေးဆင်းရောဂါ၊
(၅) ကိုယ်ဝန်ရှိသည်ဟု သံသယ ဖြစ်နေသူ၊
(၆) အသည်းရောဂါ အမျိုးမျိုးရှိနေသူ ဖြစ်နေသူများသည် ပဋိသန္ဓေ တားဆေးကို သုံးစွဲရန် မသင့်ကြောင်း သတိပြုစေချင် ပါသည်။
(၁) ပဋိသန္ဓေ တားဆေးကြောင့် သွေးပြန်ကြော ပိတ်ခြင်း၊ သွေးပြန် ကြောအတွင်း သွေးခဲခြင်းတို့ ဖြစ်တတ်သည်။ ဆေးသုံးစွဲ သူများတွင် ဤကဲ့သို့ ဖြစ်ရန် ၂ ဆမှ ၁၁ ဆအထိ အန္တရာယ် ပိုမိုကြောင်း သိရသည်။ ဦးနှောက်တွင်း သွေးကြောကျဉ်းခြင်း၊ ပိတ်ခြင်းမှာ သုံးစွဲသူများတွင် ၂ ဆပိုမိုဖြစ်တတ်သည် နှလုံးသွေးကြောကျဉ်း ရောဂါနှင့် နှလုံးသွေးကြော ပိတ်ရောဂါများလည်း ဆေးသုံးစွဲသူများတွင် ပိုမိုဖြစ်တတ်သည်။ အထူးသဖြင့် အသက်(၃၅)နှစ် ကျော်ပြီး ဆေးလိပ် သောက်သူ၊ သွေးတိုးရှိသူ၊ ဝလွန်းသူနှင့် ဆီးချိုရောဂါ ရှိသူများတွင် ပိုမိုအန္တရာယ်များ ပါသည်။ တားဆေးကို အသက် ၃၅ နှစ်ကျော် အထက် အမျိုးသမီးများ တွင် ဆေးကို ၅ နှစ်ဆက် တိုက်စား လာပါက သွေးကြောကျဉ်းရောဂါ များကြောင့် သေဆုံးမှုမှာ ၁၀ ဆကျော် များပြားလာကြောင်း တွေ့ရသည်။
(၂) မျက်စိအတွင်း ခံအာရုံကြောကို ရောင်စေသည်။ ဆေးသောက် နေစဉ် မျက်စိမှုန်လာခြင်း၊ မျက်ခွံကျခြင်းတို့ ဖြစ်ပေါ်လာပါက ဆေးကို ရပ်ပြီး မျက်စိစမ်းသပ်ရန် လိုအပ်သည်။
(၃) ပဋိသန္ဓေတားဆေးကို ကြာရှည်စွာ သောက်သုံးက ရင်သား၊သား အိမ်၊သားဥ အိမ်နှင့် သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာဖြစ်ရန် အလားအလာ ရှိသည်။
(၄) ပဋိသန္ဓေ တားဆေးကြောင့် အသည်း၊ အကျိတ်လုံး ပေါက်ခြင်း၊ အသည်းရောင်ခြင်း၊ အသည်းမာခြင်းနှင့် အသည်းကင်ဆာ ဖြစ်တတ်ခြင်း။
(၅) သည်းခြေအိတ်ရောင်ခြင်းနှင့် သည်းခြေအိတ် ရောဂါအမျိုးမျိုး တို့ဖြစ်တတ်ကြောင်း တွေ့ရသည်။
(၆) ဆေးသုံးစွဲသူများတွင် သွေးတိုးရောဂါ ဖြစ်နှုန်း များပြားလာကြောင်း သိရသည်။ ပဋိသန္ဓေ တားဆေးကို ၅ နှစ်ဆက်တိုက် သုံးစွဲပါက သွေးတိုး ဖြစ်နှုန်းမှာ ၃ ဆပိုမိုများပြား နိုင်ကြောင်း သိရသည်။
(၇) သွေးဆင်းများခြင်း၊ အနည်းငယ် ဆက်တိုင်ဆင်းခြင်း၊ ရာသီသွေး မလာခြင်းစသော ရာသီသွေးမမှန်သည့်ရောဂါလက္ခဏာများ ပေါ်တတ်။
(၈) ကိုယ်လက်ရောင်ခြင်း၊ ဖောခြင်း၊ ဆေးဖြတ်လိုက်သော်လည်း မြုံသွားခြင်း၊ ရာသီလာစဉ်နာကျင် ကိုက်ခဲခြင်း၊ သားမြတ်ရောင်ခြင်း၊ ကိုယ်အလေးချိန် တက်ခြင်း၊ ကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ အရေပြားယားနာပေါက်ခြင်း၊ စိတ်ညစ်ခြင်း၊ စိတ်လှုပ်ရှား လွယ်ခြင်း၊ မျက်စိ တိမ်ကွယ်ခြင်း၊ ဖိုမစိတ်ဆန္ဒ အပြောင်းအလဲ ရှိခြင်း၊ အစားအသောက် ပျက်ခြင်း၊ ခြေလက် ထုံကျဉ်ခြင်း၊ ခေါင်းမူးခြင်း၊ နှာမွှန်ခြင်း၊ မောပန်းလွယ် ခြင်း၊ခါးကိုက်ခြင်း၊ နှုတ်ခမ်းမွေးများ ပေါက်ခြင်း၊ ဆံပင်ကျွတ်ခြင်း၊ ယားယံ ခြင်း၊ အရေပြားအောက်သွေးယိုခြင်း၊ သွေးအားနည်းခြင်း၊ ဝမ်းကိုက်ခြင်း၊ သွားဖုံးရောင်ခြင်းနှင့် အဆစ်အမြစ် ရောင်ခြင်းတို့ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသည်။
သိမ်းမှုအောက်တွင်ရှိသောမူဆလင်ညီအစ်ကိုတော်များအဖွဲ့ မှ အကျဉ်းသား၃၇ဦးသေဆုံး
ပြီးနောက် မတည်မငြိမ်ဇြစ်နေသော ဆိုင်းနိုင်းကျွန်းဆွယ်တွင် စစ်သွေးကြွများကရဲ၂၅ဦး
လွတ်မြောက်သွားခဲ့ သည်ဟုဆိုသည်။ဘာဒီ၏ ရုပ်ပုံအားရုပ်သံမှ ထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့ သည်
ထိုစဉ်အတွင်း ယခင်သမ္မတဟောင်း မူဘာရက်အပေါ်စွဲချက်တင်မှုလေးခုတွင် တတိယမြောက်
မှုများအပေါ်အလျင်အမြန်ပယ်ဖျက်ပေးရန် Human Right Watch မှတောင်းဆိုခဲ့ သည်။
အီဂျစ်နိုင်ငံတွင် အဓိကအချက်မှာ ဒီမိုကရေစီမဟုတ်ဘဲအစိုးရယန္တရားလည်ပတ်ရန်သာ
ရန်ဂျေရုဆလင်ပို့ စ်အားထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ သည်။
တရုတ်တွင် ဘတ်စ်ကားပေါ် ဓားဖြင့် ရမ်းကားတိုက်ခိုက်
တရုတ်နိုင်ငံတွင် ဘတ်စ်ကား တစ်စင်းကို ဓားဖြင့် ရမ်းကား တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် သေဆုံးသူ ကလေးငယ် အရေအတွက်သည် (၃)ဦးထိ မြင့်တက်လာကြောင်း သိရသည်။ တနင်္လာနေ့က ဟီနန်တွင် ဖြစ်ပွားသော ရမ်းကား အကြမ်းဖက်မှုအတွင်း လူတစ်ဦးသည် ဓားတစ်လက်ဖြင့် ဘတ်စ်ကားပေါ် ပါလာသူများကို ရန်ပြုခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ အခင်းဖြစ်ပွားသည့်နေ့က (၂)ဦး သေဆုံးခဲ့ပြီး အင်္ဂါနေ့တွင် နောက်ထပ် ကလေး(၁)ဦး ဆေးရုံပေါ်တွင် ထပ်မံ သေဆုံးကြောင်း ဒေသဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်များက ဆိုသည်။
အန်ယန်းမြို့တော် အုပ်ချုပ်ရေး ဌာနက သေဆုံးသူ အားလုံးသည် ငယ်ရွယ်သူများချည်း ဖြစ်ကြပြီး အသက်အငယ်ဆုံးမှာ (၁၀)လသာ ရှိသေးသည့် မိန်းကလေးဟု အတည်ပြု ပြောကြားခဲ့သည်။ ကျန်သေဆုံးသူ (၂)ဦးသည် (၁၀)နှစ်နှင့် (၁၈)နှစ် အသီးသီး ရှိနေကြသည်။ ဓားကိုင်လူရမ်းကားသည် ဘီဂူအိုသို့ ဦးတည်နေသော ဘတ်စ်ကားပေါ်တွင် ရမ်းကားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး လူ(၁၅)ဦး ဒဏ်ရာများ ရရှိခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။ အဆိုပါ တိုက်ခိုက်မှု အပြီးတွင် တရားခံသည် ထွက်ပြေး လွတ်မြောက်နေဆဲ ဖြစ်သည်။ တနင်္လာနေ့က တိုက်ခိုက်မှုအပြီး ဒဏ်ရာရသူများကို ဆေးရုံ ပို့ဆောင်စဉ်မှာပင် (၂)ဦး သေဆုံးသွားသည်။
ဒဏ်ရာရသူများအနက် အသက်အကြီးဆုံးသည် (၆၇)နှစ်အရွယ်ဖြစ်ပြီး အသက်အငယ်ဆုံးသည် (၁၈)နှစ်ဟု ဆေးရုံနှင့် နီးစပ်သူများက ဆိုသည်။ အန်ယန်းမြို့တော် အုပ်ချုပ်ရေး ဌာနသည် အဆိုပါ ရမ်းကားတရားခံကို ရှာဖွေရန် ရဲဝန်ထမ်း (၄၀၀)ကို ဖြန့်ကျက် တာဝန်ပေးထားသည်။ ဓားသမားသည် လမ်းဘေးရှိ ပြောင်းခင်းတစ်ခုထဲ ဝင်ရောက် လွတ်မြော်ကခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ အန်ယန်းရဲတပ်ဖွဲ့သည် အဆိုပါ လူသတ်သမားအကြောင်း သတင်းပေးသူကို ဆုငွေ ယွမ်တစ်သိန်း ပေးအပ်မည်ဟုလည်း ကြေညာထားသည်။
လူကုန်ကူး ခံရ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံသားများ ဖမ်းဆီး ရမိ …….
နေပြည်တော် သြဂုတ် ၂၁
၂ဝ၁၃ ခုနှစ် သြဂုတ် ၁၉ရက် ညနေ ၅နာရီခွဲက ဧရာဝတီတိုင်း ဒေသကြီး ငရုတ်ကောင်း မြို့နယ်ခွဲ နံ့သာပု ကျေးရွာ ဂိုရန်ကြီးကျွန်း ကမ်းခြေတွင် ဘင်္ဂါလီ လူမျိုး ၅၃ဦးအား တာဝန် ရှိသူများမှ ဖမ်းဆီး ရမိခဲ့သည်။
အဆိုပါ ဖမ်းဆီးရမိ သူများအား စစ်ဆေးမေးမြန်းရာ ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တောနေ ဘင်္ဂါလီ ၁၇ဦးက ၎င်းတို့အား မောင်တော မြို့နယ် ငါးခူရ ကျေးရွာနေ လူပွဲစား ဘင်္ဂါလီလူမျိုး အာယု ၃၅နှစ်မှ လူတစ်ဦးလျှင် ငွေတစ်သိန်းခွဲ၊ နှစ် သိန်း ရယူပြီး မလေးရှားနိုင်ငံသို့ ပို့ဆောင်ပေးမည်ဟု ဆိုကာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံထဲသို့ ခေါ်ဆောင်သွားပြီး ဘင်္ဂလား ဒေ့ရ်ှနိုင် ငံသား ၂ဝဝကျော် ခန့်တို့နှင့် အတူ သြဂုတ် ၁၃ရက်က ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ အုန်းကျွန်းမှ စက်လှေဖြင့် ထွက်ခွာခဲ့ကြောင်း၊ သြဂုတ် ၁၉ ရက် ညနေ ၅နာရီခန့်က ဧရာဝတီတိုင်း ဒေသကြီး ငရုတ်ကောင်းမြို့နယ် ခွဲရှိ ဂိုရန်ကြီး ကျွန်းအနီး သို့ ရောက်ရှိစဉ် ရာသီဥတု ဆိုးရွားပြီး လှိုင်းလေ ထန်သောကြောင့် ကမ်းခြေအနီး စောင့်ဆိုင်းစဉ် အဆိုပါ ဖမ်းဆီးရမိ ၅၃ ဦးမှာ အစာနှင့် ရေရိက္ခာ ပြတ်လပ်၍ စက်လှေပေါ်မှ ခုန်ချလျက် နံ့သာပု ကျေးရွာသို့ ကူးခတ်ခဲ့ရာ ကမ်းခြေ၌ သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့များမှ ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ဖမ်းဆီးရမိ တရားခံများအား သက်ဆိုင်ရာမှ လိုအပ်သလို စစ်ဆေး မေးမြန်းလျက် ရှိကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။
မြန်မာသံရုံးဗုံးခွဲဖို့ သံသယရှိသူ ၄ဦး ထပ်မံဖမ်းဆီးခံရ
အကြမ်းဖက်သမားတွေကို လက်လံနှိမ်နင်းဖမ်းဆီးနေတဲ့ အင်ဒိုနီးရှားရဲတွေ (Credit: Reuters)
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ဂျကာတာမြို့မှာရှိတဲ့ မြန်မာသံရုံးကို ဗုံးခွဲဖို့ကြံစည်မှုနဲ့ သံသယဖြစ်နေတဲ့ အမျိုးသား လေးဦးကို အင်ဒိုနီးရှားရဲတွေဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
သံသယဖြစ်ဖွယ်ရာ လူလေးဦးကို စနေနေ့ကနေ အင်္ဂါနေ့အထိ လိုက်လံဖမ်းဆီးမိခဲ့တာဖြစ်ပြီး အင်္ဂါနေ့မှာ ဖမ်းမိတဲ့ အမျိုးသားနှစ်ဦးဟာ အကြမ်းဖက်မှုနဲ့ ထောင်ဒဏ်ရှစ်နှစ် ကျခံရဖူးသူတွေဖြစ်ပြီးတော့ ၂၀၀၈ ခုနှစ်က မှ ပြန်လွတ်လာတာဖြစ်တယ်လို့ အင်ဒိုနီးရှားရဲတပ်ဖွဲ့ ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် Ronny Sompie က ပြောပါ တယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာလူမျိုးတွေနဲ့ မွတ်စလင်တွေကြားက ပဋိပက္ခတွေဟာ အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ မွတ်စလင်လူမျိုးတွေကို အမျက်ဒေါသ ပိုမိုတိုးပွားစေခဲ့ပြီး အခုဖမ်းဆီးမိတဲ့ အမျိုးသားလေး ဦးဟာ မြန်မာသံရုံးကိုဗုံးခွဲဖို့ ကြံစည်မှုမှာ ပါဝင်တယ်လို့ သံသယဖြစ်ခံထားရသူတွေ ဖြစ်ကြောင်း ရဲတပ်ဖွဲ့ ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် က ပြောပါတယ်။
မေလ ၂ရက်နေ့တုန်းက မြန်မာသံရုံးကို ဗုံးခွဲဖို့အတွက် ကျောပိုးအိတ်ထဲမှာ လက်လုပ်ဗုံး ငါးလုံးသယ် ဆောင်လာတဲ့ အမျိုးသား ၂နှစ်ဦးကို အင်ဒိုနီးရှားရဲတွေကဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အကြာသေးခင်ကပဲ ဂျာကာတာမှာရှိတဲ့ အက္ကယာန ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးကျောင်းကို မွတ်စလင် စစ်သွေး ကြွအဖွဲ့တဖွဲ့ကနေ ဗုံးခွဲတိုက်ခဲ့ပြီး လူတဦးအနည်းငယ် ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် နိုင်ငံပေါင်း ၅ဝ ကျော်မှ မိုဘိုင်းဖုန်းများ သယ်ဆောင် အသုံးပြုခွင့်ရရှိနေပြီဟု မြန်မာ့ဆက် သွယ်ရေးလုပ်ငန်းမှ သိရသည်။
”နိုင်ငံတွေ တော်တော်များနေပါ ပြီ။ အာရှ၊ ဥရောပ၊ အရှေ့ဖျားနိုင်ငံတွေ များပါတယ်”ဟု မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းမှအရာရှိတစ်ဦးက ပြောသည်။
ယင်းသို့ ပြည်ပဖုန်းများ မြန်မာ၌ သုံးစွဲခွင့်ပေးရာတွင် မြန်မာ့ဆက်သွယ် ရေးနှင့် ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်သည့် ကုမ္ပ ဏီများမှ ဖုန်းများသာ အသုံးပြုနိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း ၄င်းကဆက်လက်ပြောသည်။
”ပြောချင်တာက နိုင်ငံငါးဆယ် သုံးစွဲခွင့်ရတယ်ဆိုတာကRoaming ချိတ်ထားတဲ့ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလုံးက ဖုန်း တွေလာသုံးလို့ရတာ မဟုတ်ဘူး။ ဥပမာ စင်ကာပူနိုင်ငံနဲ့ ချိတ်ဆက်ထားရင် စင် ကာပူမှာအော်ပရေတာအဖြစ် လုပ်ကိုင် နေတဲ့ ကုမ္ပဏီသုံးခုထဲက ကုမ္ပဏီ တစ် ခုနဲ့ပဲ ချိတ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့။ ကုမ္ပ ဏီတစ်ခုပဲချိတ်ထားရင်ကျန်တဲ့ ကုမ္ပဏီ နှစ်ခုက ဖုန်းတွေ လာသုံးလို့မရဘူး။ ဒီသဘောပါ”ဟု ၄င်းကရှင်းပြသည်။
အဆိုပါ ဆောင်ရွက်ချက်များကို ၂ဝ၁၂ ခုနှစ်ဆန်းမှ စတင်အကောင်အ ထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ကျင်းပပြီးစီး ခဲ့သည့် ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးဖိုရမ် (အရှေ့ အာရှ)တွင် စတင်သုံးစွဲခွင့်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ် ကြောင်း၎င်းက ဆက်လက်ပြောသည်။
လက်ရှိတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၌ ပြည်ပ နိုင်ငံများမှ ဖုန်းများသုံးစွဲနိုင်ပြီဖြစ် သော်လည်း မြန်မာဖုန်းများအား ပြည်ပ နိုင်ငံများသို့ သယ်ဆောင်အသုံးပြုနိုင် မည်မဟုတ်သေးေ ကြာင်း ငွေကြေး ဖြတ် တောက်မှုနှုန်းထားများ ကျန်ရှိနေသည့် အတွက် အသုံးပြုခွင့် မပေးခြင်းဖြစ် ကြောင်း ၄င်းကဆက်ပြောသည်။
”စမ်းသပ်မှုတွေတော့ ပြုလုပ်နေ ပါတယ်။ ဘယ်အချိန်အသုံးပြုခွင့်ပေး သွားမလဲဆိုတာတော့ ခန့်မှန်းလို့ မရ သေးပါဘူး။ ရတာနဲ့ ကြေညာပေးသွား မှာပါ”ဟု ၄င်းက ဆက်ပြောသည်။
မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်း သည် ယခင်က မြန်မာ့ဖုန်းများ နိုင်ငံ တကာနှင့် အပြန်အလှန်သယ်ဆောင်အ သုံးပြုခွင့်ကို ၂၇ ကြိမ်မြောက် ဆီးဂိမ်း တွင် ဆောင်ရွက် မည်ဟု ပြောဆိုထား မှုများရှိခဲ့သော်လည်း လက်ရှိတွင်Inbound Roaming အဆင့်သာ ရှိပြီး Outbound Roaming မရောက် ရှိသေးကြောင်း သိရသည်။
"မွတ်ဆလင်တို့အား အထင်ကြီးနေသူ အမြှောင်မယားများ သိစေရန်"
ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာလူမျိုးတို့သည် မျိုးရိုးအစဉ်အဆက်က ရိုးသားကြ၏။ ပွင့်လင်းကြ၏။ အေးအေးဆေးဆေး နေတတ်ကြ၏။ အမှုမဲ့နေနိုင်လွန်း၏။ ဘဝရှေ့ရေးကို တွေးတောဆင်ခြင်မှု မရှိကြပေ။ လူတစ်ဖက်သားကို ကောင်းတဲ့သူဖြစ်စေ၊ မကောင်းတဲ့သူဖြစ်စေ၊ ကိုယ့်ကိုအန္တရာယ်ပေးမည့်သူဖြစ်စေ၊ အန္တရာယ်မပေးမည့်သူ ဖြစ်စေ၊ ရန်သူဖြစ်စေ မိတ်ဆွေဖြစ်စေ၊ လူမိုက်ဖြစ်စေ၊ လူကောင်းဖြစ်စေ၊ လူယုတ်ဖြစ်စေ၊ လူမြတ်ဖြစ်စေ၊ ဘာသာတူဖြစ်စေ၊ ဘာသာခြားဖြစ်စေ၊ သနားကြင်နာတတ်၏။
သို့သော် မြန်မာလူမျိုးတို့သည် လူတစ်ဖက်သားကို ကဲ့ရဲ့သန်၍ အပြစ်တင်မြန်ကြ၏။ ယခုအခါ မြန်မာတစ်မျိုးသားလုံး၌ မွတ်ဆလင်တို့၏ ဘာသာအန္တရာယ်ကျရောက်လာခြင်းကို မြန်မာလူမျိုးအများစုသည် မသိရှိကြသေး၊ “ထိပ်ချတာတောင် ဓားပြမှန်းမသိကြသေး” အမျိုးဘာသာ သာသနာ့အရေးကို အမျှော်အမြင်ရှိကြသော ရဟန်း သံဃာတို့နှင့် လူပုဂ္ဂိုလ်အချို့တို့သည် အမိမြေအတွက် လူမျိုးအတွက် ဘာသာ သာသနာအတွက် ရှေ့တန်းက မားမားမတ်မတ်ဆောင်ရွတ်နေတာကို နောက်ကနေ အားပေးကူညီရမည့်အစား “ဘုန်းကြီးတွေ နေရာတကာပါတယ် သူတို့ကြောင့် ဆန်ဈေးတက်တယ် ဓာတ်ဆီဈေးတတ်တယ်၊ ဆန်ဈေးကျအောင် စီးပွားရေးကောင်းအောင်ကျတော့ မလုပ်ဘူး၊ အဓိပ္ပါယ်မဲ့တွေကိုလိုက်လုပ်တယ်။ ဝိနည်းနဲ့မညီဘူး၊ မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အထဲမှာ ဒါတွေမပါဘူး။ ကုလားပဲရန်ရှာနေတယ် ဘာဖြစ်တယ် ညာဖြစ်တယ်”ဟု အဓိပ္ပါယ်မဲ့ အမြှောင်မယားအတွေး အခေါ်နဲ့ စွပ်စွဲကြပေသည်။
သူ့လင်ကုလားအကြောင်း သိဟန်မတူ၊ မိမိတို့အမျိုး ဘာသာတည်တန့်ရေး၊ မိမိတို့မလုပ်လျှင် ဘယ်သူကလာ၍ လုပ်ပေးမည်နည်း။ မိမိတို့ အေးအေးဆေးဆေးနေလိုပါသည်။ သို့သော် မြန်မာပြည်မှာလာနေပြီး မြန်မာလူမျိုးတို့ကို စော်ကားရင် လက်ပိုက်ကြည့်နေမည်မဟုတ်ပါ။ တရားက တရားဖြစ်သလို၊ ဓားကလည်းဓားပါပဲ၊ တရားအသိရှိသလို ဓားကိုလည်း အမြဲကြည့်နေရပါတယ်။ တရားအကြောင်းကိုလည်း တွေးနေရသလို ဓားကိုလည်း သွေးနေရပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာ သာသနာနှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့အတွက် လိုအပ်မည်ဆိုပါလျှင် အသက်ကိုပင် ငဲ့ကွက်နေမည်မဟုတ်ပါ။ ဒါကြောင့် အမြှောင်မယားတို့ သင်တို့၏ ဦးနှောက်ထဲရှိ အမြှောင်မယားအတွေးအခေါ်ကို ဖယ်ရှားပစ်လိုက်ပြီး ယနေ့မှစ၍ အမျိုး ဘာသာ သာသနာအတွက် ကြိုးစားကြပါတော့…ဟု တိုက်တွန်းနှိုးဆော်အပ်ပါသည်။
Posted by drmyochit Thursday, August 22, 2013, under အနုပညာ | No comments
သရုပ်ဆောင် မိုးဟေကိုက သူမအနေနဲ့ မီဒီယာတိုင်းကို အင်တာဗျူး ဖြေပေးသူမဟုတ်ပဲ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်သူတွေကိုသာ တလေးတစား ဖြေဆိုပေးသူဖြစ်ကြောင်း အတိအလင်း ၀န်ခံပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ အနုပညာ လောကမှာ ပရိသတ် စိတ်ဝင်စားခြင်း ခံရသူတွေကို သတင်းမီဒီယာတွေက အသည်းအသန် အင်တာဗျူးဖို့ ကြိုးစားကြတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မိုးဟေကိုက အခုလို ဖွင့်ပြောလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမနဲ့ မိသားစုကို ခင်မင်ရင်းနှီးတဲ့ ပေါ်ပြူလာ၊ အလင်းတန်းနဲ့ နံနက်ခင်း ဂျာနယ်တွေက လာမေးရင် တလေးတစားနဲ့ သေသေချာချာ ဖြေပေးပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက တယ်လီဖုန်းနဲ့ အင်တာဗျူးဆိုရင်လည်း မိုးဟေကိုက ဖြေဆိုလေ့ ရှိသူမဟုတ်ပါဘူး။ ဂျာနယ်အသစ်တွေဆိုရင်တော့ မိုးဟေကိုရဲ့ အင်တာဗျူးကိုရဖို့ ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်တဲ့ အနေအထားပါ။ ဒါကြောင့် မီဒီယာ စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာ သူမကို သိပ်ပြီး မတွေ့ရတာပါလို့တောင် မိုးဟေကိုက ဖွင့်ပြောသွားပါတယ်။
မကြာသေးခင်က အိမ်ခြံမြေအရှုပ်အထွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး မိုးဟေကိုရဲ့ သတင်းတွေ ရေပန်းစားခဲ့ပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာတော့ သိပ်မတွေ့ရတော့ပါဘူး။
ဆီးဂိမ်းအကြို အားကစား ပြိုင်ပွဲများ အခမဲ့ ကြည့်ရှုခွင့်နှင့် ကြိုပို့ စီစဉ်ပေးမည်
(ရန်ကုန်၊ သြဂုတ် ၁၉)
ဆီးဂိမ်း အကြိုပြိုင်ပွဲများအား အခ မဲ့ ကြည့်ရှုခွင့် အပြင် သွားလာရေး အတွက် စီစဉ်ပေးသွားမည်ဟု အားကစား ဝန်ကြီး ဌာနမှ သိရသည်။
”ဘယ်ပွဲစဉ်မဆို အခမဲ့ ကြည့်ခွင့် ပေးသွားမှာပါ။ အခြား ဝန်ဆောင်မှု အနေနဲ့ ပြိုင်ပွဲ လာကြည့်ဖို့ လွယ်ကူအောင် လိုင်းကားတွေ ပြေးဆွဲပေးမယ့် ပုံစံမျိုး ဆောင်ရွက်ပေး မှာပါ” ဟု အားကစား ဝန်ကြီး ဌာနမှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက ပြောသည်။
လက်ရှိတွင် ဆီးဂိမ်း အကြိုပြိုင်ပွဲ အဖြစ် နေပြည်တော်တွင် ဗိုဗီနမ်နှင့် ကရာတေးဒို ပြိုင်ပွဲနှစ်ခု ကျင်းပရန် ရှိပြီး ဗိုဗီနမ် အားကစားနည်းကို ယခုလ ၂၂ ရက်နေ့မှ ၂၄ ရက်နေ့ အထိလည်း ကောင်း၊ ကရာတေးဒိုကို ၂၈ ရက်နေ့မှ ၃ဝ ရက်နေ့ အထိလည်းကောင်း ပြုလုပ် မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
”ရုပ်သံကတော့ ပြသမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အခမဲ့ လာရောက် ကြည့်ရှုခွင့်ပဲ ပေးသွားမှာပါ။ ရန်ကုန်က လာကြည့်မယ့် ပရိသတ်တွေကိုလည်း ကားစီစဉ် ပေးဖို့ မရှိပါဘူး။ ပြိုင်ပွဲကြီး ကျင်းပတော့ မှပဲ စီစဉ်ပေးသွားမှာပါ”ဟု ၄င်းက ဆက် လက်ပြောသည်။
အဆိုပါ ပြိုင်ပွဲများကို နေပြည် တော် ဝဏ္ဏသိဒ္ဓိ အားကစားရုံတွင် ကျင်း ပမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဆီးဂိမ်း ကျင်းပသကဲ့ သို့ စီစဉ် သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ၄င်းက ဆက်ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ အနေဖြင့် ၂၇ ကြိမ် မြောက် အရှေ့တောင် အာရှ အားကစား ပြိုင်ပွဲကို အိမ်ရှင်အဖြစ် လက်ခံကျင်းပမည် ဖြစ်သည့် အတွက် ဆီးဂိမ်း အကြို ဖိတ်ခေါ်ပြိုင်ပွဲများ ကျင်းပ ပြုလုပ်နေ ခြင်းဖြစ်ပြီး လက်ရှိတွင် ဆီးဂိမ်း အကြို ပြိုင်ပွဲ အဖြစ် မြင်းစီး၊ မြားပစ်၊ နပန်း၊ စက်ဘီး၊ တိုက်ကွမ်ဒို စသည့် အားကစား နည်းများကို ကျင်းပပြု လုပ် ထားကြောင်း သိရသည်။
လက်ရှိတွင် ဆီးဂိမ်း အကြို (Pre Sea Games) အဖြစ် ကျင်းပမည့် ဗိုဗီနမ်နှင့် ကရာတေးဒို ပြိုင်ပွဲများ အပြင် MFFU-16 Championship 2013 ပြိုင်ပွဲကို လည်း နေပြည်တော် တွင် ပြု လုပ်နေကြောင်း သိရသည်။
၀န်ထမ်းကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ ၀န်ထမ်းတွေကျင့်ဝတ်ကို သိကြရဲ့လား???
လက်ရှိ ၀ဘ်ဆိုဒ်တွေ၊ လူမှုကွန်ယက် တွေပေါ်မှာ သတင်းကြီးနေတဲ့ အင်ပါယာသတင်းစာကိုထုတ်ဝေတဲ့ ဦးကောင်းမြင့်ထွဋ် ရဲ့ အသံဖိုင်ကို နားထောင်လိုက်ရပါတယ်။ ကျနော်အဲဒီမှာ တစ်ခုစဉ်းစားလိုက်မိတယ်။ အဲတာဘာလဲဆိုတော့ ၀န်ထမ်းတွေ ၀န်ထမ်းကျင့်ဝတ်ကို လိုက်နာဖို့လိုနေသေးတာပါပဲ။
၀န်ထမ်းဆိုတာ ဟိုးထိပ်ပိုင်း သမ္မတကနေ အောက်ခြေအဆင့် စာရေးအထိ အကုန်ဝန်ထမ်းပါပဲ။ ကျနော် လည်း ၀န်ထမ်းတစ်ယောက်ပါ။ ကျနော်မှာ အထက်အရာရှိဆိုတာ ရှိပါတယ်။ သူ့ရဲ့ လုပ်ငန်းတွေကို အကောင်အထည်ဖော်တဲ့အခါ ကျနော့်ကို ခိုင်းပါတယ်။ အဲဒီလို ခိုင်းတဲ့နေရာမှာ တော်ရင်တော်သလို ချီးမြှောက်သလို ညံ့ရင်လည်း အဆူခံ အပြောခံရပါတယ်။ ဆုပေးဒဏ်ပေးစနစ်ကို ကျင့်သုံးတာပါ။ အလုပ်တစ်ခုလုပ်တဲ့အခါ လက်အောက်ငယ်သားတွေ လုပ်ချင်ကိုင်ချင်စိတ်ရှိလာအောင် တော်တဲ့အခါမှာ ချီးမွန်းမယ်။ ချီးမြှောက်မယ်။ ညံ့တဲ့အခါမှာလည်း ဆူချင်ရင်ဆူမယ်။ ဆဲတဲ့အခါလည်း ဆဲပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါဟာ အလုပ်တစ်ခုကို အောင်အောင်မြင်မြင်နဲ့ ပြီးမြောက်စေချင်တဲ့ ဆန္ဒသပ်သပ်နဲ့ပါ။ ဒါကို ကျနော်တို့ လက်အောက်က ၀န်ထမ်းတွေအနေနဲ့ ဘယ်လိုခံယူကြမလဲ။
ချီးကျူးခံ ဆုချခံရတဲ့အခါ မိန့်မိန့်ကြီးပြုံးပြီး ကိုယ်တိုင်ကျေနပ်နေပြီး ဆူခံဆဲခံရရင် အထက်အရာရှိအပေါ် မကျေနပ်ချက်နဲ့ တိုင်မှာလား။ လူအများသိအောင် အင်တာနက်ပေါ်တင်ပြီး အထက်အရာရှိကို သိက္ခာချမှာ လား။ ဒါမှမဟုတ် အထက်အရာရှိကို မကျေနပ်တာနဲ့ပဲ ရုံးမှာရှိတဲ့ လုပ်ငန်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့စာတွေကို ဓာတ်ပုံ ရိုက်၊ မိတ္တူကူးပြီး လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးကို ထိခိုက်အောင်လုပ်မှာလား။ အကြောင်းအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ အဲလိုတွေ လုပ်လိုက်ရင် ဘာတွေဖြစ်ကုန်မလဲ ဆိုတာမိမိကိုယ်တိုင် သေချာသိရဲ့လား။ အထက်အရာရှိအပေါ် အဲလိုလုပ်လိုက်လို့ အရာရှိ အလုပ်ပြုတ်သွားရင်၊ အရှက်ကွဲ သိက္ခာကျသွားရင် ကျေနပ်နေမှာလား။
ဒီအတွေးတွေဟာ မှားယွင်းပါတယ်။ ၀န်ထမ်းတစ်ယောက်အနေနဲ့ ၀န်ထမ်းကျင့်ဝတ်ဆိုတာ ရှိပါတယ်။ ၀န်ထမ်းဖြစ်တဲ့အတွက် နိုင်ငံတော်ရဲ့ လျှို့ဝှက်အက်ဥပဒေကို လိုက်နာရပါမယ်။ နိုင်ငံတော်ရဲ့ သစ္စာကို စောင့် သိရမယ်ဆိုတာ ရှိပါတယ်။ ဒါတွေကို မလိုက်နာ မစောင့်ထိန်း ဖောက်ဖျက်မယ်ဆို ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲ။ သေချာပါတယ် အဲလူဟာ ၀န်ထမ်းကောင်းတစ်ယောက် မဟုတ်နိုင်သလို ၊ ကိုယ့်နိုင်ငံအပေါ် ကိုယ့်အလုပ်ရှင်အပေါ်မှာ သစ္စာဖောက်ဖျက်တဲ့ သစ္စာဖောက် တစ်ယောက်ဖြစ်သွား မှာပါ။
အခုဆိုရင် အင်ပါယာသတင်းစာတိုက်ပိုင်ရှင် ဦးကောင့်မြင့်ထွဋ် အနေနဲ့ သူ့ဝန်ထမ်းတွေ အပေါ်မှာ ပြောခဲ့ ဆိုခဲ့တာတွေက သူ့ရုံးတွင်းကိစ္စတွေပါပဲ။ သူ့အနေနဲ့ အလုပ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆူမယ်၊ ပြောမယ် ဒါတွေဟာ အလုပ်ရှင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ သူ့ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ပါပဲ။ သူ့ရဲ့ အကျိုးစီးပွားအတွက် အလုပ် လုပ်တဲ့ နေရာမှာ အောင်မြင်လာအောင် သူ့ဝန်ထမ်းတွေအပေါ်မှာ သွန်သင်မယ် ဆုံးမမယ်။ ဘယ်လို လုပ်ရ ကိုင်ရမလဲဆိုတာ သင်ပေးမယ်။ သူ့အကျိုးစီးပွားအောင်မြင်မှ သူခန့်ထားတဲ့ ၀န်ထမ်းတွေလည်း ခံစားခွင့်တွေရလာမယ်။ မအောင်မြင်ရင် ၀န်ထမ်းတွေပါ ခံစားခွင့်တွေ ရသင့်ရထိုက်တာထက် လျော့နည်း လာမယ်။ ဒီ့အတွက် သူ့ဝန်ထမ်းတွေကို သွန်သင်ဆုံးမတာ မထူးဆန်းပါဘူး။ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အကျိုး အတွက် ကောင်းမွန်အောင်သူလုပ်တာပါ။ ၀န်ထမ်းတွေအနေနဲ့လည်း ဒါကို သိနားလည်ရမယ်။ သူ့ကုမ္ပဏီမှာ အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင် သူ့ကုမ္ပဏီက ထုတ်ထားတဲ့ လိုက်နာစောင့်ထိန်းရမယ့် စည်းကမ်းတွေကို လိုက်နာနိုင်ရမယ်။ ဒါတွေကို လိုက်နာဖို့လည်း ဦးကောင်းမြင့်ထွဋ်အနေနဲ့ အလုပ်စခန့် ကတည်းက စာချုပ်မချုပ်ခဲ့ဘူးလား။ ဒါတွေဟာ သင်ခန်းစာယူစရာပါ။
အစိုးရ၀န်ထမ်း၊ ဒါမှမဟုတ် ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်း ဘယ်က၀န်ထမ်းပဲဖြစ်နေပါစေ ၀န်ထမ်းတွေဟာ မိမိတို့ကို ထမင်းကျွေးနေတဲ့ မိမိရဲ့အဖွဲ့အစည်းအပေါ် သစ္စာစောင့်သိရပါမယ်။ ၀န်ထမ်းကျင့်ဝတ်တွေကို လိုက်နာရပါ မယ်။ ဒီလိုမှ မဟုတ်ရင် ကျနော်တို့ လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ ပြဿနာတွေ ရှိလာနိုင်ပါတယ်။ ၀န်ထမ်းတွေချည်းပဲ လိုက်နာရမှာတွေ ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ အလုပ်ရှင် အကြီးအကဲကလည်း လက်အောက်အပေါ်မှာ တရားမျှတစွာ ဆက်ဆံဖို့လိုပါတယ်။
၀န်ထမ်းတွေအနေနဲ့လည်း မတရားတာလုပ်ခံရရင်ခါင်းငုံ့ခံနေရမယ်လို့လည်း မဆိုလိုပါဘူး။ လစာမရလို့ တိုင်မယ်ဆိုရင် အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနကို တိုင်လို့ရပါတယ်။ မိမိဘက် က ၀န်ထမ်းကျင့်ဝတ်နဲ့ အညီ ဖြေရှင်းလို့ရပါတယ်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်တော့ တဖက်သား သိက္ခာကျအောင် အရှက်ရအောင် Personal ကိစ္စတွေကို လူသိရှင်ကြားနဲ့ ဖွတာ ပြောတာ လုပ်တာတွေ လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ ဒါဟာ ၀န်ထမ်းကျင့်ဝတ်နဲ့မညီတဲ့ အင်မတန်ရှက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ လုပ်ရပ်ပါပဲ။ နှစ်ဖက်လုံးလည်း အကျိုးမရှိပါဘူး။ ၀န်ထမ်းတွေအနေနဲ့ မိမိတို့အပေါ် သတ်မှတ်ထားတဲ့ အလုပ်နဲ့ ပတ်သက်သည့် စည်းကမ်းများကို လိုက်နာ၍သာ အလုပ်လုပ်သင့်ပါတယ်။
ဒါနဲ့ ပတ်သက်၍ "မိမိလေ့လာခဲ့ဖူးသည့် အဖွဲ့အစည်းများတွင် အဖွဲ့၏ ပြောရေးဆိုခွင့် ရှိသူမှလွဲ၍ မီဒီယာကို စကားပြောခွင့် မရှိကြောင်း၊ အဖွဲ့အစည်း တိုင်းတွင် စည်းကမ်း သတ်မှတ်ချက်များ ရှိသောကြောင့် ယင်း စည်းကမ်း သတ်မှတ်ချက်များကို လိုက်နာ နိုင်မှသာလျှင် လက်မှတ်ထိုး စာချုပ်သင့်ကြောင်း" Yangon Times နေ့စဉ်သတင်းစာ ထုတ်ဝေသူ ဦးကိုကိုက ပြောသည်။
၀န်ထမ်းတွေအနေနဲ့ မိမိအလုပ်ရှင်အနေနဲ့ ဆူတဲ့အခါရှိမယ်၊ ချီးမွမ်းတဲ့အခါရှိမယ်။ ဘာတွေ ပဲဖြစ် ဖြစ်ဒါတွေဟာ လုပ်ငန်းအောင်မြင်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်တယ်၊ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အကျိုးရှိစေမယ် ဆိုတာ သိထားရပါမယ်။ ဒါ့ကြောင့် ၀န်ထမ်းတွေအနေနဲ့လည်း ၀န်ထမ်းကျင့်ဝတ်တွေကို သိရှိပြီး အလုပ်အပေါ်နဲ့ မိမိအကြီးအကဲ၊ နိုင်ငံတော်အပေါ်ပါ သစ္စာရှိကြဖို့ တိုက်တွန်းပြောကြားလိုပါတယ်။
ဖောက်ထွင်းရိုက်ကူးနိုင်တဲ့ ဗွီဒီယို ကင်မရာ
၁၉၉၈ ခုနှစ်မှာ Sony ကုမ္မဏီဟာ အင်္ကျီအ၀တ်အစားတွေကို ဖောက်ထွင်းရိုက်ကူးနိုင်တဲ့ ဗွီဒီယို ကင်မရာ ၇၀၀၀၀၀ ကျော်ကို ရောင်းချခဲ့ပါတယ်။တကယ်တော့ အဲဒီဖြစ်စဉ်ဟာ မတော်တဆဖြစ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး အထူးပြုလုပ်ထားတဲ့ Infrared Light တွေထုတ်ပေးတဲ့ မှန်ဘီလူးတွေ မှားယွင်းတပ်ဆင်မိတဲ့အတွက် ဒီလိုဖြစ်တာပါ။ဒီကင်မရာကို ဒေါ်လာ ၆၀၀ နဲ့ ရောင်းချခဲ့ပြီး ဈေးကွက်ထဲက သိမ်းနိုင်သလောက်ပြန်သိမ်းခဲ့ပေမယ့် တော်တော်များများကျန်ပါသေးတယ်တဲ့။
မြိတ်မြို့သို့ ၀င်ရောက် လာနိုင်သော ဖောက်ခွဲရေးသမား သုံးဦး၏ပုံကို သက်ဆိုင်ရာက ထုတ်ပြန်
မာမက် (ခ) သိန်းအောင် အာဇတ် ယူနွတ် (ခ) လှမြင့်
မြိတ်မြို့သို့ ၀င်ရောက်လာနိုင်သော ဖောက်ခွဲရေးသမား သုံးဦး၏ပုံကို သက်ဆိုင်ရာက ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ အဆိုပါ ဖောက်ခွဲရေးသမားများ သတင်းကြောင့် မြို့အ၀င်အထွက် လမ်းကြောင်းများ အပါအ၀င် ပင်လယ်ပိုင်းရှိ ကျွန်းများနှင့် ကျေးရွာများအထိ စနစ်တကျ စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်းများ ပြုလုပ်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
ယခုလလယ်ပိုင်းမှ စတင်ပြီး မြိတ်မြို့သို့ ဖောက်ခွဲရေးသမားသုံးဦး ဖောက်ခွဲရေး ပစ္စည်းများနှင့်အတူ ၀င်ရောက်လာနိုင်ကြောင်း သတင်းများ ရရှိခဲ့ရာ လုံခြုံရေး တိုးမြင့်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ဖောက်ခွဲရေးသမားသုံးဦး ရောက်ရှိနေသည့် သတင်းမှာ ဓာတ်ပုံများနှင့်အတူ အာဏာပိုင်များထံသို့ ရောက်ရှိ နေပြီး ရပ်ကွက်အလိုက်၊ ကျေးရွာများအလိုက် လုံခြုံရေး တိုးမြှင့်ခဲ့သလို လူဝင်လူထွက်များ သိရှိနိုင်ရန် ဧည့်စာရင်းများစစ်ခြင်း၊ မြို့အ၀င်ထွက်များတွင် စောင့်ကြည့်ခြင်းများ လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
"ဖောက်ခွဲရေးသမား သုံးဦးကတော့ အခုထိ မမိသေးပါဘူး။ သတင်းတွေ အမျိုးမျိုး ထွက်နေပေမယ့် လုံခြုံရေးကိုတော့ စနစ်တကျ လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ ကျေးရွာနဲ့ ရပ်ကွက်တွေအလိုက် ဆယ်အိမ်စု၊ ရာအိမ်စုမှူးတွေအထိ အဆင့်ဆင့် စောင့်ကြည့်တဲ့ စနစ်နဲ့ လုပ်ဆောင်နေသလို ပင်လယ်ထဲက ကျွန်းတွေ၊ ဆိပ်ကမ်းအ၀င်အထွက်ကိုလည်း စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးနေတယ်။ သတင်းရပြီးတာနဲ့ လုံခြုံရေးကို ယခင် ကထက် ထပ်တိုးထားပါတယ်။ သြဂုတ် ၁၇ နေ့ကစပြီး နေ့ရောညပါ လူတစ်ဦးချင်းအလိုက် ရှာပါတယ်။ ဆိုက်ကားတွေ ဆိုင်ကယ်တွေကို တစ်စီးချင်း ရှာပါတယ်။ ညပိုင်းဆိုရင် မြစ်ထဲမှာ လှေတွေနဲ့ ကင်းလှည့် စောင့်ကြည့် ပါတယ်။ ရွာတွေက လှေဆိပ်လေးတွေအထိ လိုက်စစ်နေပါတယ်။ လုံခြုံရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ထပ်တိုးထားတာပဲ ရှိပါတယ်။ ဘယ်နေ့ဘယ်ရက်အထိ ချမယ်ဆိုတာမျိုး မရှိပါဘူး။ ရက်အကန့်အသတ်မရှိ ဆောင်ရွက်မှာပါ" ဟု ကျွဲကူးတံတားတွင် တာဝန်ကျနေသူ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
သြဂုတ်လလယ်ပိုင်းတွင် ဖောက်ခွဲရေးသမားသုံးဦး ထိုင်းနိုင်ငံမှတစ်ဆင့် ပင်လယ်ရေကြောင်း ခရီးဖြင့် ၀င်ရောက်လာကြောင်း၊ ကော့သောင်-ဘုတ်ပြင်းဘက်မှ ရေလမ်းခရီးကို အသုံးပြုကာ ၀င်ရောက်လာခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သတင်းများ ရရှိပြီးနောက်ပိုင်း မြိတ်မြို့တွင် လုံခြုံရေး တိုးမြှင့်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
သက်ဆိုင်ရာမှ ထုတ်ပြန်သည့် ဖောက်ခွဲရေးသမား သုံးဦးမှာ မာမက် (ခ) သိန်းအောင်၊ အာဇတ်နှင့် ယူနွတ် တို့ဖြစ်ပြီး မာမက် (ခ) သိန်းအောင်မှာ ယခင် မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ပြီး ယခု ထိုင်းနိုင်ငံသားအဖြစ် ခံယူထား သူဖြစ်ကာ မြန်မာနိုင်ငံ၌ အသက် (၁၂) အထိ နေထိုင်ခဲ့ကြောင်း၊ အာဇတ်မှာ အင်ဒိုနီးရှားတွင် နေထိုင်ကာ နိုင်ငံသား စိစစ်ဆဲဖြစ်ကြောင်းနှင့် ယူနွတ် (ခ) လှမြင့်မှာ ရခိုင်ပြည်နယ် ဇာတိဖြစ်ကာ ယခုထိုင်းနိုင်ငံသား ခံယူထားကြောင်း သိရပြီး ၎င်းတို့ သုံးဦးစလုံးမှာ မြန်မာစကားကို ကောင်းမွန်စွာ ပြောဆိုနိုင်ကြောင်းလည်း သိရသည်။
ယင်းတို့နှင့် ပတ်သက်၍ ပြင်ပတွင် သတင်းမျိုးစုံ ထွက်ပေါ်နေသော်လည်း ၎င်းတို့အား ယခုအချိန်အထိ ဖမ်းဆီးရမိခြင်း မရှိသေးကြောင်း သိရသည်။
အကြောသေနေသော ချစ်သူနှင့် လက်ထပ်ရန် တစ်ပြည်တစ်ရွာသို့ သွားရောက်ခဲ့သော မေတ္တာကြီးမားသည့် မလေးရှား အမျိုးသမီး
ကွာလာလမ်ပူ သြဂုတ် ၁၇
အသက် ၃၅ နှစ်အရွယ်ရှိ မလေးရှားနိုင်ငံသူ အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည် အကြောသေရောဂါ ဖြစ်နေသည့် တရုတ်နိုင်ငံမှ သူမ၏ ချစ်သူနှင့် လက်ထပ်ရန် တရုတ်နိုင်ငံသို့ မကြာသေးမီက သွားရောက်ခဲ့ပြီးနောက် လက်ထပ်ခဲ့ကြောင်း တရုတ်နေ့စဉ်ထုတ် သတင်းစာများ၏ ဖော်ပြချက်အရ သိရသည်။
မလေးရှားနိုင်ငံ ကွာလာလမ်ပူမြို့မှ ဂန်ဆုတ်ရင်းဆိုသူ အဆိုပါ အမျိုးသမီးနှင့် အဆစ်အမျက် ရောင်ရမ်း ကိုက်ခဲသည့် ရောဂါကြောင့် အကြောသေ ဝေဒနာကို ခံစားနေရသူ ဟူပေးပြည်နယ် တန်ရှန်မြို့မှ အသက် ၃၈ နှစ် အရွယ်ရှိ လီကန်ယုတို့ နှစ်ဦးသည် ၂ဝ၁၁ ခုနှစ် ဇွန်လကတည်းက အင်တာနက် အသုံးပြုရင်း တွေ့ဆုံ ချစ်ကြိုက်ခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်သည်။
ဂန်ဆုတ်ရင်းသည် ကနဦးက လီ၏ ဘဝပေး အခြေအနေကို ကိုယ်ချင်းစာ ခံစားရပြီး တရုတ်နိုင်ငံသို့ သုံးကြိမ် ခရီးသွားခဲ့ပြီးနောက် လီနှင့် အချိန်အတော်ကြာ အတူနေခဲ့ပြီး နောက် လီအား ပိုမို ချစ်မြတ်နိုး မိလာခဲ့ ကြောင်း သိရသည်။
လီသည် ခုနစ်နှစ်အရွယ် ကတည်းက အကြောသေ ရောဂါကို ဆိုးရွားစွာ ခံစားခဲ့ရပြီး နောက်ဆုံးတွင် အိပ်ရာမှ မထနိုင်သည် အထိ ဖြစ်သွားခဲ့ကြောင်း Sin Chew နေ့စဉ်ထုတ် သတင်းစာက ဖော်ပြခဲ့သည်။ လီနှင့်ဂန်တို့ နှစ်ဦးသည် ဇူလိုင် ၂၄ ရက်က လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနတွင် မှတ်ပုံတင်ခဲ့ပြီး သြဂုတ် ၈ ရက်တွင် နှစ်ဖက်မိဘ စုံလင်စွာဖြင့် လက်ထပ် မင်္ဂလာပွဲကို ဆင်နွှဲခဲ့သည်။
ကော်ဖီ အသောက်များ သေလမ်းသွားမည်ဟုဆို
တစ်ပတ်လျှင် ကော်ဖီ ၂၈ ခွက်ထက် ပိုသောက်သုံးသူ အသက် ၅၅ နှစ်အောက် ငယ်ရွယ်သူများသည် အသက်အန္တရာယ် ပိုမို စိုးရိမ် ရကြောင်း အွန်လိုင်း ဂျာနယ် တစ်ခုဖြစ်သည့် Mayo Clinic Proceedings တွင် ရေးသား ဖော်ပြထားသည်။
ကော်ဖီကို အလွန်အကျွံ သောက်သုံးခြင်းဖြင့် အသက်အန္တရာယ် စိုးရိမ် ရကြောင်း အထူးသဖြင့် တစ်ပတ်လျှင် ၂၈ ခွက်၊ တစ်ရက် လေးခွက်နှုန်း ခန့် ကော်ဖီ သောက်သူများတွင် စိုးရိမ်စရာ ကောင်းကြောင်း၊ ကော်ဖီ အလွန်အကျွံ သောက်သုံးသူ ၅၆ ရာခိုင်နှုန်းသည် ရောဂါများဖြစ်ပွားလွယ် ပြီး သေဆုံးနှုန်းလည်း မြင့်မားသည်ဟု ယင်းစာစောင်တွင် ရေးသား ထားသည်။
အထူးသဖြင့် အမျိုးသမီးများ အသက် ၅၅ နှစ်အောက် ကော်ဖီ သောက်သုံးမှု လွန်ကျူးသူများတွင် သေဆုံးမှု နှစ်ဆ ပိုများကြောင်း ယခုလေ့လာထားချက် မှာ ၁၉၇၁ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၂ ခုနှစ်အတွင်း လေ့လာထားချက်များ ဖြစ်ကြောင်း အသက် ၂၈ နှစ်မှ ၈၇ နှစ်အတွင်း အမျိုးသမီး ၄၃၇၂၇ ဦးကို လေ့လာရာမှ ရလဒ်ကို ထုတ်ပြန်ထားခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ယင်းစာစောင်က ဆိုသည်။
ကလေးဝမြို့ တွင် အလယ်တန်းပြ ကျောင်းဆရာမ တစ်ဦး ဆွဲကြိုးချ သေဆုံး
Posted by drmyochit Thursday, August 22, 2013, under မှုခင်း | No comments
စစ်ကိုင်း သြဂုတ် ၂ဝ
စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး ကလေးဝမြို့ အမှတ်(၃) ရပ်ကွက်၌ ယမန်နေ့မွန်းလွဲ ၁ နာရီခန့်က အလယ်တန်းပြ ကျောင်းဆရာမတစ်ဦး မိမိကိုယ်ကိုယ် ဆွဲကြိုးချ၍ သေဆုံးခဲ့ကြောင်း မြို့နယ် အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာနရှိ ဝန်ထမ်းတစ်ဦးက အတည်ပြု ပြောကြားခဲ့သည်။
သေဆုံးသူ အလယ်တန်းပြ ကျောင်းဆရာမကြီး ဒေါ်ခင်စန်းမြင့်သည် အသက် ၅၃ နှစ်ခန့် အရွယ်ရှိပြီး အိမ်ထောင်မရှိသူ တစ်ဦးတည်းနေ အပျိုကြီး တစ်ယောက်လည်း ဖြစ်သည်ဟု၎င်းက ဆက်လက် ပြောကြားခဲ့သည်။
ကလေးဝမြို့ ရဲဌာန၏ မှတ်တမ်းများတွင် အဆိုပါ လူသေဆုံးမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သေဆုံးသူ ဆရာမကြီး ဒေါ်ခင်စန်းမြင့်သည် ကလေးဝမြို့ အထက်တန်းကျောင်း၌ အလယ်တန်းပြ တာဝန် ထမ်းဆောင်နေသူ တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ဆေးနားခွင့် ရယူထားသူ တစ်ဦးဖြစ်ကာ စိတ်ကျရောဂါ ဝေဒနာရှင် တစ်ဦးဖြစ်သည်။
''ဆရာမကြီးက သဘောထား ကောင်းပြီး သင်ကြားမှုပိုင်း ဆိုင်ရာ မှာလည်း စိတ်ရှည် သည်းခံနိုင်တာကြောင့် တပည့်တွေ အားလုံး နီးပါးက ချစ်ခင် ရိုသေကြပါတယ်''ဟု အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်နေ ရေယာဉ်ပိုင်ရှင် တစ်ဦးကလည်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ထိုနေ့က ရဲစခန်း တာဝန်ကျ တာဝန်မှူး ဒုတိယ ရဲအုပ် ရဲစိုးမိုး၏ စစ်ဆေးချက်များ အရ သေဆုံးသူသည် ၎င်း၏ နေအိမ်အပေါ်ထပ်ရှိ ထုပ်တန်း၌ အရှည် ၁၁ ပေခန့်ရှိ ဖြူ၊ နီကျား နိုင်လွန်ကြိုးကို အသုံးပြု၍ ဆွဲကြိုးချ သေဆုံးနေခြင်း ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ သေဆုံးမှုတွင် မည်သည့် အတွက်ကြောင့် သေဆုံး ရသည်ကို စစ်ဆေး ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ဒုတိယ ရဲအုပ် ရဲစိုးမိုးက တရားလို ပြုလုပ် တိုင်တန်းခဲ့ရာ ကလေးဝ ရဲစခန်းက သေမှုသေခင်း အမှတ်စဉ် (၃/၂ဝ၁၃)အရ ရေးဖွင့် လက်ခံ ဆောင်ရွက်လျက် ရှိကြောင်း စစ်ဆေး သိရှိရသည်။
Genting Highland တွင် အဆိုးဝါးဆုံးကားမှောက်မှု့ (သို့) မလေးရှားနိုင်ငံ၏ အဆိုးဝါးဆုံး ကားမှောက်မှု့ (37ဦးသေဆုံး)
မလေးရှားနိုင်ငံ၏ ကြားဖြတ်အထူးသတင်းအနေဖြင့် Genting Highland (@) Casino မြို့တော် မှ ကွာလာလမ်ပူမြို့သို့ပြန်လည် ထွက်ခွာလာသည့် ခရီးသည်တင် Bus ကားတစ်စီး ယနေ့ 21.8.2013 နေ့လည် ၂ နာရီ ၄၅ မိနစ်တွင် တောင်ဆင်လမ်းမှ အောက်ဘက် မီတာ ၆၀ ထိတိုင်အောင် ထိုးကျတိမ်းမှောက်မှု့သတင်းအား မလေးရှားရောက်မြန်မာများ facebook စာမျက်နှာမှ တင်ဆက်ပေးရပါသည် ။
မလေးရှားသမိုင်းတွင် အဆိုးဝါးဆုံးကားမှောက်မှု့ ဟု ခေါင်းစဉ်တပ်ထားသော အဆိုပါကားမှောက်မှုတွင် ကားမှောက်သည့် အချိန်မှ ယခု ည 8 နာရီ အထိ ကားပေါ်ပါလာသူ ၃၇ ဦး သေဆုံးခဲ့ပြီး အများစုမှာ မလေးရှားနိုင်ငံသားများ ဖြစ်ကြောင်း thestar သတင်းဌာနမှ တင်ပြသွားခဲ့ပါသည် ။
တောင်ပေါ်မှာ မီတာ 60 ကျော် စောက်နက်သည့် တောင်ကြောလမ်းတွင် တိမ်းမှောက်သွားခဲ့သည့် Bus ကားမှာ Titiwangsa (တီတီဝမ်ဆာ) မှာ Genting Highland သို့အသွားအပြန်ပြေးဆွဲပေးနေသော Genting Bus ဖြစ်ပြီး တိမ်းမှောက်သည့် ကားပေါ်တွင် ခရီးသည် 53 ဦး တိုင်အောင် သတ်မှတ် ဦးရေထက်ပိုမို တင်ဆောင်လာခဲ့သော ကားဖြစ်သည် ။
ထိုကားတွင်စီးနင်းလာသောခရီးသည် 53 ဦမှ 37 ဦးယခုချိန်ထိ သေဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည် ။ သေဆုံးသူများထဲမှ ထက်ဝက်မှ မလေးနိုင်ငံသား တရုတ် ၊ မလေး (ဒရိုင်ဘာအပါ) နှင့် အန္ဒိယ တို့ပါဝင်ပြီးကျန်ထက်ဝက်မှ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံသား ၊အရှေ့အလည်ပိုင်း မှ ခရီးသည်များ နှင့် ထိုင်းလူမျိုးများပါဝင်ကြောင်း အာဏာပိုင်များမှ ထုတ်ပြန်သွားခဲ့သည် ။
မိုးရွာပြီး ချောနေသော တောင်ဆင်းလမ်းတွင် သတ်မှတ်ခရီးသည်ထက်ပိုမိုတင်ဆောင်လာသော အဆိုပါ Bus ကားမှာ မည်သည့် အတွက်ကြောင့် အဓိက တောင်အောက်ပြုတ်ကျခဲ့သည်ကို မစုံစမ်းနိုင်သေးသော်လည်း အသက်ရှင်သူများထဲမှ ပြန်လည်ပြောပြ ချက်အရ Bus ကားမှာ တောင်ဆင်း Chin Swee Cave ဘုရားကျောင်းအကျော်အရောက် မထိမ်းနိုင်ပဲ
တောင်ပတ်လမ်း ထိန်းကွပ် ကွန်ကရစ် ဘောင်အားတိုက်ချကာမီတာ 60 ကျော်အထိ လိမ့်ကျ တိမ်းမှောက်ခဲ့ကြောင်း ၊ စတင်တိမ်းမှောက်စတွင် 33 ဦး သေဆုံးပြီး ဆက်လက် ရှာဖွေတွေ့ရှိချက်အရ ယခုချိန်ထိ 37 ဦးသေဆုံး ခဲ့ပြီးဖြစ်သည် ။
ယခုအချိန် တိုင်အောင် အာဏာပိုင်များမှာထို Bus ကားတိမ်းမှောက်မှုအတွက် ကြိုးစားလုပ်ကိုင်နေဆဲဖြစ်ပြီး အသက်ရှင်သူများကို Bentong ဆေးရုံတွင် ထားရှိကာ အထူးကုသလျှက်ရှိကြောင်း သိရသည် ။
Posted From မလေးရှားရောက်မြန်မာများ
ဆီးဂိမ်းတွင် အာဆီယံနိုင်ငံများသို့ ခေါ်ဆိုရန် အော်တိုဖုန်း ၃၀ဝကျော်ထားမည်
ဆီးဂိမ်းပွဲ တော်တွင် အာဆီယံနိုင်ငံများသို့ ခေါ်ဆိုနိုင်မည့် အော်တိုတယ်လီ ဖုန်းအလုံးပေါင်း ၃၀ဝကျော်ကို အားကစားရုံများတွင် အသုံးပြုနိုင် ရန် ထားရှိသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းအော်တိုတယ်လီဖုန်း များကို ပြည်ပမှလာရောက်ယှဉ် ပြိုင်ကြမည့် အားကစားသမားများ အသုံးပြုနိုင်ရန်ရည်ရွယ်၍ သီးသန့် ထားရှိပေးခြင်းဖြစ်ပြီး အာဆီယံ နိုင်ငံများအား စိတ်ကြိုက်မိနစ်အ ကန့်အသတ်မရှိ ခေါ်ဆိုနိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
''ဖုန်းအလုံးပေါင်း ၃၀၀ လောက်တပ်ဆင်ပေးမယ်လို့ ပြင် ဆင်ထားပါတယ်။ အဲဒီအတွက်လဲ လုပ်ကိုင်ဖို့ အထက်ကိုစာတင်ထား ပါတယ်။ ဖုန်းအလုံးရေလိုအပ်ရင် ထပ်တိုးချဲ့ပေးဖို့လဲရှိတယ်။ အဓိက က နိုင်ငံခြားသားတွေအသုံးပြု နိုင်ဖို့အတွက်ပါ။ ခွင့်ပြုချက်ရပြီး တာနဲ့ ဒီလအတွင်းစလုပ်တော့မှာ ပါ''ဟု VMG Telecom မှ အထွေ ထွေမန်နေဂျာ ဦးအောင်မင်းသိန်း ကပြောသည်။
အဆိုပါအော်တိုကြိုးဖုန်း များကို ဆီးဂိမ်းပွဲတော်ကျင်းပမည့် ရန်ကုန်၊ နေပြည်တော်၊ ပုသိမ်၊ ငွေဆောင် အစရှိသည့်နေရာများ တွင်အသုံးပြုနိုင်ရန် တပ်ဆင်ပေး သွားမည်ဖြစ်ပြီး ယင်းစနစ်အား ဆီးဂိမ်းပွဲတော် တစ်လျှောက်လုံး အသုံးပြုခွင့်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
''ပြည်ပကအားကစားသမား တွေအတွက် အဓိကလုပ်ပေးရတာ က သူတို့အားကစားပွဲပြိုင်ပြီးလို့နိုင်တယ်ဆိုရင် သူတို့နိုင်ငံက မိ သားစုတွေကို ချက်ချင်းပြောနိုင် အောင်လို့ ရည်ရွယ်ပြီးလုပ်ပေးတာ ပါ။ ဒီက ကစားသမားတွေကတော့ ဖုန်းအလွယ်တကူရှိတော့ ရှိဖို့မလို အပ်ဘူးလေ။ ထားပေးတဲ့ဖုန်းတွေ ကလဲ အာဆီယံနိုင်ငံတွေကိုပဲခေါ် လို့ရမှာပါ''ဟု ယင်းကဆက်လက် ပြောသည်။
ဆီးဂိမ်းပွဲတော်တွင် အာဆီ ယံနိုင်ငံများသို့ ခေါ်ဆိုနိုင်မည့် ကြိုးဖုန်းတပ်ဆင်နိုင်ရန်အတွက် VMG Telecom ကုမ္ပဏီ၊ မြန်မာ့ ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းနှင့် ရတနာ ပုံတယ်လီပို့ကုမ္ပဏီတို့ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိ ရသည်။
VMG Telecom သည် လွန် ခဲ့သည့်ခုနစ်နှစ်ခန့်က လန်ဒန်တွင် စတင်အခြေစိုက်တည်ထောင်ခဲ့ ပြီး ၂၀၁၂ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီမှစတင် ၍ မြန်မာနိုင်ငံတွင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
From : ..Yangon Media Group
သမ္မတဦးသိန်းစိန် မတွေ့ဆုံလိုသော ကင်တားနားကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေပြည်တော်၌ တွေ့ဆုံ
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး ကိုယ်စားလှယ် သောမတ်စ်ကင်တားနားတို့ သြဂုတ် ၂၀ ရက်က နေပြည်တော်ရှိ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေအိမ်၌ တွေ့ဆုံခဲ့သည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံစဉ် မစ္စတာကင်တားနား၏ ခရီးစဉ်နှင့် နိုင်ငံအတွင်း လူ့အခွင့်အရေး ကိစ္စများနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း၊ မိတ္ထီလာ ခရီးစဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ် ပြောကြားခဲ့သော်လည်း အခြားခရီးစဉ်များနှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ် ပြောကြားခဲ့ခြင်း မရှိကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က သတင်းထောက်များကို ပြောကြားသည်။
ထို့အပြင် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ အရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ပြောကြားခဲ့မှုအပေါ် "အားလုံးလွတ်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်လို့ ပြောလိုက်တယ်" ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က သတင်းထောက်များကို ပြောကြားသည်။
ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး ကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာ သောမတ်စ်ကင်တားနားသည် ရခိုင်၊ ကချင်၊ ချင်း၊ ရှမ်းပြည်နယ်နှင့် မိတ္ထီလာမြို့များသို့ သွားရောက်ခဲ့ပြီး ဒေသခံများ၊ တာဝန်ရှိသူများနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ရာတွင် ဒေသခံများ၏ ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြမှုများနှင့် ကြုံတွေ့ခဲ့သည်။
ယာဉ်တိုက်၍ ဆိုင်ကယ် မောင်းလာသည့် တပ်မတော်သား ပွဲချင်းပြီး သေဆုံး
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး တောင်ငူခရိုင် ရေတာရှည်မြို့နယ် ရန်ကုန်-မန္တလေး လမ်းဟောင်း မိုင်တိုင် အမှတ် ၁၈၇/၀နှင့် ၁၈၇/၁ ကြား တောင်နန်ချွန် ကျေးရွာ ဆည်မြောင်းရုံး ရှေ့တွင် သြဂုတ်လ ၁၈ ရက် ည ၇ နာရီခန့်က တပ်မတော်သား တစ်ဦး မောင်းနှင်လာသော ဆိုင်ကယ်ကို ယာဉ်တစ်စီး အနောက်မှ ဝင်တိုက်သဖြင့် ဆိုင်ကယ် မောင်းနှင်လာသူ တပ်မတော်သား သေဆုံးခဲ့ကြောင်း ရေတာရှည်မြို့နယ် မြို့မ ရဲစခန်းမှ ရဲအရာရှိ တစ်ဦးက The Voice သို့ ပြောကြားသည်။
သေဆုံးသူသည် တောင်ငူမြို့နယ် ကေတုမတီမြို့သစ် တောင်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ် စခန်းမှူးရုံးမှ မှန်စီကျေးရွာ တပ်ပိုင် လယ်တွင် တာဝန်ကျနေသူ အသက် ၄၇ နှစ်အရွယ် တပ်သား ဝင်းကို ဖြစ်ပြီး ၎င်းကို ဝင်ရောက် တိုက်မိသော မော်တော်ယာဉ်မောင်းသည် ထွက်ပြေး တိမ်းရှောင်နေသဖြင့် ထပ်မံ စုံစမ်း စစ်ဆေးလျက် ရှိပြီး မော်တော်ယာဉ် မောင်းနှင် ထွက်ပြေးနိုင် သည့် လမ်းကြောင်းများနှင့် လမ်း အသုံးပြုခ ကောက်ခံသည့် CCTV များမှ တစ်ဆင့် လိုက်လံ စစ်ဆေးနေကြောင်း ၎င်းက ပြောသည်။
သေဆုံးသူသည် ၎င်းစီးလာသည့် Kenbo 110.CC အစိမ်းရောင် မော်တော် ဆိုင်ကယ်ဘေးတွင် ဦးခေါင်း၊ အောက်ပိုင်း၊ ဗိုက်ပွင့်ကာ သေဆုံးခဲ့ကြောင်း အဆိုပါ ရဲစခန်း၏ စစ်ဆေးချက်များအရ သိရှိရသည်။
ဦးခေါင်းနှင့် ဝမ်းဗိုက်တွင် ဒဏ်ရာ ပြင်းထန်စွာ ရရှိကာ ပွဲချင်းပြီး သေ ဆုံးခြင်းဖြစ်ကြောင်းနှင့် ညအချိန် ဖြစ်၍ မျက်မြင်သက်သေလည်း မရှိဘဲ အမှု အမြန် ပေါ်ပေါက်ပါစေဟု အခင်းဖြစ်ပွားရာ နေရာသို့ ရောက်ရှိ ခဲ့သူ ရေတာရှည်မြို့နယ် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်မှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက ပြောကြား သည်။
ယင်း ယာဉ်တိုက်ခံရ၍ သေဆုံးမှုကို ယာဉ် (ပ) ၁၉/၂၀၁၃ ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၀၄ (က) အရ အမှုဖွင့် အရေးယူထားကြောင်း ရေတာရှည် မြို့နယ် မြို့မ ရဲစခန်းမှ စုံစမ်း သိရှိရသည်။
From : .. the voice
ဒေသခံရွှေတူးဖော်လုပ်ကိုင်သူများထံမှ KIA အဖွဲ့ ဆက်ကြေးရွှေများ လာရောက်တောင်းခံ
ကချင်ပြည်နယ် ရှင်ဗွေယန်မြို့နယ် စက်စဲချောင်းနှင့် စနစ်ချောင်း တစ်လျှောက်တွင်
ရွှေတူးဖော် လုပ်ကိုင် လျက်ရှိသော စက်ဆိုင်း ပိုင်ရှင်များထံမှ KIA အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့က
သြဂုတ် ၁၉ ရက်တွင် ဆက်ကြေးအဖြစ် ရွှေများ လာရောက်တောင်းခံသွားကြောင်း
“မနေ့က မနက်ပိုင်းမှာ ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ ရောက်လာတယ်။
ဒီနှစ်အတွက် ဆက်ကြေးငွေ ပေးဖို့ လာတောင်းတာပါ၊ အရင်တုန်းကငွေယူပေမယ့်
အခုရွှေပဲယူမယ်လို့ ပြောသွားတာပဲ၊ စက်ဆိုင်းပိုင်ရှင် တွေက တစ်ချို့တစ်ဝက်ပေး
လိုက်ကြတယ်လို့ သိရပါတယ်” ဟု စက်စဲချောင်းတွင် စက်ဆိုင်းလုပ်သားတစ်ဦးက
ပြောပြသည်။ စနစ်ချောင်းတွင် ရွှေတူးဖော်နေသော စက်ဆိုင်းပိုင်ရှင်တစ်ဦးကတော့
“ဒီချောင်းတွေဟာ သူတို့ကချင်လွတ် မြောက်ရေးအဖွဲ့ အနောက် ပိုင်းအုပ်ချုပ်ရေးရုံး
လက်အောက်မှာရှိတဲ့အတွက် ဒီနှစ်တစ်နှစ်စာ ဆက်ကြေး ပေးရမယ်လို့ ပြောသွားတာပဲ၊
လစဉ်ငွေ မဟုတ်တော့ဘဲရွှေပေးရမယ်၊ ဒီချောင်းနဲ့ စက်စဲချောင်းမှာ စက်ဆိုင်း တွေက
အတော်များတယ်။ စက်ဆိုင်းကလည်း အကြီးအသေးရှိတယ်လေ၊အဲဒီအပေါ်မူတည်ပြီး
ပေးရတဲ့ရွှေရွေးလည်းမတူဘူးပေါ့၊ ကျွန်တော်ကတော့စက်ကြီးမို့လို့တစ်လကိုရွှေ ၃ကျပ်သား
ပေးရမှာပါ။ မပေးနိုင်ရင် မလုပ်ဘဲပြန်ဖို့ပဲရှိတာပေါ့” ဟု ပြောပြသွားသည်။
ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်(KIA)အဖွဲ့မှ ၂၀၁၃ - ၂၀၁၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက်
ဆက်ကြေးငွေ များအား လိုက်လံကောက်ခံလျက်ရှိရာ စက်စဲချောင်းနှင့်စနစ်ချောင်း
တစ်လျှောက်တွင်ရွှေတူးဖော်နေသော စက်ဆိုင်းများဆီမှ တစ်နှစ်စာအတွက်လစဉ်ပေးသွင်း
ခိုင်းထားကြောင်း၊ စက်ဆိုင်းများမှာ ဟွန်ဒါ၊ တစ်လုံးထိုး၊ နှစ်လုံးထိုး၊ လေးလုံးထိုး၊ ခြောက်လုံး
ထိုးဟူ၍ အကြီးအသေးအလိုက်ခွဲခြားပြီး ရွှေများကို ပေးသွင်းရမည်ဖြစ်၍စက်ဆိုင်းပိုင်ရှင်
များမှာအရှုံးပေါ်မည့်အခြေအနေနှင့် ရင်ဆိုင်နေရကြောင်း၊ တောင်းထားသော ရွှေပမာဏအား
မပေးနိုင်ခဲ့လျှင် ဆက်လက်တူးဖော်ခွင့်မပြုမည်ကိုစိုးရိမ်နေကြောင်း ရွှေစက်ဆိုင်းပိုင်ရှင်များ၏
မီးသင်္ဂြိုလ်စက် စည်ပင်ကသိမ်းမည်ဟု သတင်းထွက်ပေါ်သောေ...
ဗီဇာသက်တမ်းကိစ္စ အလုပ်သမားတွေသိအောင် ဥပဒေ ထုတ်ပြန်ဖ...
ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ အတိုက်အခံပါတီ ခေါင်းဆောင်တို့ ဒု-အ...
အောက်ပါရောဂါရှိသူ မိမိချစ်သူကို ကိုယ်ဝန်တားဆေးမတို...
လူကုန်ကူး ခံရ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံသားများ ဖမ်းဆီး ...
မြန်မာသံရုံးဗုံးခွဲဖို့ သံသယရှိသူ ၄ဦး ထပ်မံဖမ်းဆီး...
"မွတ်ဆလင်တို့အား အထင်ကြီးနေသူ အမြှောင်မယားများ သိေ...
ဆီးဂိမ်းအကြို အားကစား ပြိုင်ပွဲများ အခမဲ့ ကြည့်ရှုခ...
မြိတ်မြို့သို့ ၀င်ရောက် လာနိုင်သော ဖောက်ခွဲရေးသမား...
အကြောသေနေသော ချစ်သူနှင့် လက်ထပ်ရန် တစ်ပြည်တစ်ရွာသု...
ကလေးဝမြို့ တွင် အလယ်တန်းပြ ကျောင်းဆရာမ တစ်ဦး ဆွဲကြ...
Genting Highland တွင် အဆိုးဝါးဆုံးကားမှောက်မှု့ (သိ...
ဆီးဂိမ်းတွင် အာဆီယံနိုင်ငံများသို့ ခေါ်ဆိုရန် အော်တ...
သမ္မတဦးသိန်းစိန် မတွေ့ဆုံလိုသော ကင်တားနားကို ဒေါ်အော...
ဒေသခံရွှေတူးဖော်လုပ်ကိုင်သူများထံမှ KIA အဖွဲ့ ဆက်ြေ...